ငါသည်တဝှိုက်မိန်းကလေးအိမ်ထောင်ရှင်ဘယျကွောငျ့အ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာငါ့မိသားစု၏ဓာတ်ပုံများကို post အခါတိုင်း, တုံ့ပြန်မှုအမြဲပျော်စရာဖြစ်ကြ. အများဆုံးအဖြစ်များလေ့, "သင်၏သားဒါကြောင့်ချောမောသည်!လှပသော "သို့မဟုတ်" အဘယျသို့တစ်မိသားစု!"ဒါပေမယ့်အခြားဘုံတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, "သင်တို့၏ဇနီးအဖြူ Is?"လူတွေကလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြသမှာငါ့ကိုမေးမြန်း. အဖြေကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော့်ဇနီးဟနျဂရေီတစ်ဦးရောနှောဖြစ်ပါသည်, အီတလီ, နှင့်-Polish သောလူအများစုမှပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုသည်, သူမအဖြူင်. ဤသည်အချို့သောမှဆီလျှော်သည်, ဒါပေမယ့်အခြားသူများအားတုန်လှုပ်သို့မဟုတ်ပင်စိတ်ပျက်စရာ. ငါမည်သူမဆို interracial လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဖြင့်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ရပါမည်မထင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါဆဲငါသည်ငါ့ "အပြေးပြိုင်ပွဲပြင်ပမှာနဲ့လက်ထပ်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြောဆိုချင်တယ်.
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားနောက်ခံမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ငါ့အဘို့ခက်ခဲတဲ့တယောက်မဟုတ်ခဲ့. ငါထိုင်နေနှင့်တစ်ဦးအကောင်းအဆိုး cons စာရင်းထွက် wrote ဘယ်တော့မှ. ထိုသို့ပြုလျှင်သော်လည်း, ကျွန်တော့်ဇနီး "မာတင်" ၏တစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲမမြင်ဖူးသောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအ con အမျိုးအစားထဲမှာပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသား, ငါကကျော် agonize သို့မဟုတ်ပါက OK ကိုခဲ့တာရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အကွံဉာဏျကိုမရှာခဲ့. ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အဘို့အသူမသည်မိန်းမယုံကြည်တယ်ခဲ့သည်, သူမအနက်ရောင်မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း.
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်, အစဉ်မပြတ်ငါအနက်ရောင်အမြိုးသမီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်မျှော်လင့်. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောနောက်ခံအမျိုးသမီးလှပသောတွေ့ရှိရ, ဒါပေမဲ့အနက်ရောင်မိန်းကလေး "။ preference ကို" ငါ့ခဲ့ကြသို့သော်လည်းငါသည်၌ငါ့ကောလိပ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါ 2006, ငါမှာအားလုံးမယားကိုရှာနေမခံခဲ့ရ. ကိုယ့်ကိုငါ့ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးပွားချင်တယ်နှင့်ကောင်းတစ်ဦးပညာရေးရ. ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ်ပဲထွက်လာခဲ့, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အခြားအရာပဒေသာခဲ့. သို့သော်လည်းငါသည်ထိုကျောင်းတွင်လူတွေ့ဆုံခဲ့အဖြစ်, ဂျက်စီကာအမည်ရှိ sophomore တကယ်အကြှနျုပျ၏အာရုံစိုက်မှုကိုဖမ်းမိကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဖြစ်လာခဲ့သည်.
ကျနော်တို့အတူတူစက်ဝိုင်းထဲသို့ပြေး ဝင်. ကျနော်တို့အတူတူခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပူးပေါင်းဖွင့်အဆုံးသတ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအများကြီးကိုမြင်လျှင်. ထိုထက်ပိုသောသူ့ကိုငါသိတယ်, ပို. သူမကိုရန်ရေးဆွဲခဲ့. သူမသည်အမှန်တကယ်ယရှေုခစျြသူမသူတောင်းသမျှလုပ်ဖို့ဒီ childlike လိုလိုလားလားရှိခဲ့ပါတယ်. ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုလူတို့အဘို့သူမရဲ့သနားကရုဏာငါ့ကိုစိန်ခေါ်နှင့်သူမနှုတ်ကပတ်တော်မှတုန့်ပြန်တဲ့နှိမ့်ချနှလုံးခဲ့. ကြောင်းပထမနှစ်တွင်ကျော်, ငါကသူ့ကိုအသင်းတော်မှာအမှုဆောင်သူမ၏အချိန်ရဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့နာရီကိုပူဇျောစောင့်ကြည့်. ကြောင်း၏အပေါင်းတို့၏ထိပ်တွင်, ငါကသူ့ကိုပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ခြင်းကိုခစျြ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှု, လေးနက်သောသို့မဟုတ်ရီစရာရှိမရှိ, အမြဲလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူစီး. ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးရန်စတင်, "ငါသည်ဤမိန်းကလေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသငျ့ပါ?"
ငါသည်ငါ့အနာဂတ်ဇနီးကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်တူဂျက်စီကာမကြည့်ခဲ့, ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားငါ့ကိုမှအရေးမလုပ်ခဲ့. ငါ့ကိုမှားရမနေပါနဲ့, ငါသူမသူမတွေ့ဆုံခဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကနေလှပတဲ့ထင်. ထိုအခါငါအဖြူရောင်မိန်းကလေးလက်ထပ်ဖို့ဆန့်ကျင်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်. ကိုယ့်ငါအလိုတခုတည်းမစဉ်းစားခဲ့. သို့သော်ငါသည်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးပြင်းနှင့်ငါ့နှလုံးသည်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်, အကြှနျုပျ၏အကွိုကျလွန်းပြောင်းလဲနေတဲ့စတင်. အကြှနျုပျ၏အဓိကဦးစားပေးကြှနျုပျ၏မယားဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီဖြစ်ကြောင်းခဲ့သည်, နှင့်ဂျက်စီကာခဲ့သည်. ဒါနဲ့သူမ၏ wifed.
ငါဖြေရှင်းခဲ့သည်တူသောအခိုက်အဘို့ငါခံစားမိခဲ့ဖူးပါ. ထိုသို့ဆိုသောကြောင့်သူမ၏လူမျိုးစုပိုရုံတစ်ဘုရားသခင်ရေးရာအမြိုးသမီးလစျြလြူရှုရန်ဖြေရှင်းကဲ့သို့ခံစားရ. ငါသည်ငါ့တန်ဖိုးထားချင်တယ်ဘယ်တော့မှ ဦးစားပေး အဘယျသို့ငါကျော်တစ်ဦးသည်မယားကို လိုအပ် ဇနီးတစ်ထဲမှာ.
ဦးစားပေးရှိခြင်းနှင့်အတူသေချာပေါက်မှားဘ​​ာမှမရှိဘူးင်, ငါတို့မူကားတစ်ဦးဖွင့်လက်နှင့်အတူသူတို့ကိုကိုင်ရန်ရှိသည်. သူတို့အချို့သောကျပန်း preference ကို fit ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအလားအလာဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီအိမ်ထောင်ဖက်လျစ်လျူရှုသူအခြို့ကလူကိုသိ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးတချို့ကတကယ်တာအရေးမပါဘူး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးတချို့ကပင်မိုက်မဲစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမျြးစာမှထိုသူအပေါင်းတို့တင်သွင်းဖို့ရှိသည်.
သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ပဋိပက္ခ၏အလယ်၌ရှိကြ၏သောအခါ,, အသားအရေသေံအရေးမပါဘူး. ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအရေးမထင်ရ. သငျသညျသူတို့ကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီနှင့်နှိမ့်ချဖြစ်ချင်တယ်. အကြှနျုပျ၏ဇနီးနဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရန်စတင်အဖြစ်, ငါသူ့အဘို့ပိုပြီးကျေးဇူးတင်ဖြစ်နိုင်ဘူး. သူမသည်အံ့သြဖွယ် mom, ငါ့သား-မဟုတ်သူမ၏တိုင်းရင်းသားနောက်ခံနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိသည်သော၏အပေါ်တစ်ဦးဘုရားရေးရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုင်. အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်အမှုအရာလို OK ကိုဒါဟာင်, ငါတို့မူကားဘုရားသခင်ဟာအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ငါတို့အဘို့အလိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒများကိုတင်ပြရန်ရှိသည်. အဘယ်သို့ငါလိုခငျြဆုံးနဲ့လိုအပျတဲ့ဘုရားရေးရာမိတ်ဖက်ခဲ့, နှင့်မူသောဘုရားသခင်ကိုထောက်ပံ့အတိအကျဘာင်.
CLL • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီ Trip ကဆိုသည်. ကျွန်မခင်ပွန်းကအဖြူရောင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကလူမည်းဖြစ်ပြီးကျွန်မရဲ့လူမျိုးအပြင်ဘက်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တာလဲလို့ကျွန်မအမြဲမေးခဲ့တယ်. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုရွေးချယ်ပြီးသူဟာဒီလောက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာလို့အမြဲတမ်းပြောတယ်, ငါကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုကောင်းတယ်. ဘုရားသခငျသညျကောငျး၏! သင်ဘာလုပ်သည်ကိုဆက်လုပ်ပါ! 116! ငါတို့မြေကြီးအောက်၌နေသည်အထိယေရှုပထမ ဦး ဆုံး!
Ericka • နိုဝင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 8:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ရိုးသားမှု Trip Lee အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသဘောတူတယ်. မင်းမှာ ဦး စားပေးမှုရှိနိုင်ပေမယ့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုင်တွယ်ရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုပထမ ဦး ဆုံးကတိကဝတ်ပြုထားတာကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူကအဲဒါကိုထောက်ခံဖို့လိုတယ်. အညီအမျှအနှစ်…
ဒီတစ်ခု • ဇန္နဝါရီလ 2, 2014 တွင် 3:52 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကိုခရီး.
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဖုန်းထဲမှာကြည့်ရတာအခက်တွေ့နေတယ်. စာမျက်နှာများသည်ဘယ်ဘက်ညာဘက် scrolling ကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်ဟုထင်ရပြီးလိုင်းတစ်ခုစီ၏အဆုံး၌ရှိသောစကားလုံးများသည်ကျွန်ုပ်၏ဖန်သားပြင်မှပြတ်တောက်နေပုံရသဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံစာကြောင်းအချို့ကိုနားမလည်နိုင်ပါ။. ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ဘရောင်ဇာနှင့်ပြtheနာဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်တည်ဆောက်မှုတွင်နည်းပညာရှိမရှိမသေချာပါ. မင်းရဲ့အဆုံးသတ်ကနေတစ်ခုခုလုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးရုံပဲ.
မာရီယာ • ဇန္နဝါရီလ 10, 2015 တွင် 8:10 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့သမီးကမင်းရဲ့ဂီတကိုနှစ်သက်တယ်. တကယ်တော့, ငါဝန်ခံရမယ်; ငါလဲလုပ်တယ်:). သူမကကျွန်တော့်ကိုအခြားအကြိုက်ဆုံးနှင့်အတူတေးဂီတကိုစတင်ရန်မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါ, lacris) မင်းရဲ့ဂီတကနေတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ငါအရမ်းဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်. သို့သော်လည်းငါသည်အတန်ငယ်နိုးနိုးကြားကြားရှိသည်. သင့်ရဲ့ဂီတကသင်၏ဇာတ်ကောင်ကိုပြသလျှင်အံ့သြစရာ. ဤအရာကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဘုရားရေးလူဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပါသည်. သင်နှင့်သင်၏လှပသောဇနီးနှင့်ချစ်စရာကောင်းသောသားအတွက်ကောင်းချီးများစွာများစွာကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြောဆိုခြင်း, ဤမျှလောက်များစွာသောမကောင်းသောအရှိရာအချိန်တွင်, လူမျိုးစုပဲ. တ ဦး တည်းဇနီးရှိသည်ဖို့အမှန်တကယ်ကံကောင်းဖြစ်ပါတယ် (မင်းကလူတစ်ယောက်ဆိုရင်) သူသည်သခင်ယေရှုကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသင်၏အနားတွင်ကိုယ်တော်အားအစေခံသည်.
AdamCraven • ဇန္နဝါရီလ 26, 2017 တွင် 10:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အာမင်!!! အချို့သောလူများသည်ဘုရားတရားကြည်ညိုသောအမျိုးသမီးကိုအဘယ်ကြောင့်လျစ်လျူရှုကြသနည်း။ သူတို့နှစ်သက်ရာများထဲမှတစ်ခုနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ငါ့မှာပျော်ရွှင်မှုမတိုင်ခင် ဦး စားပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်. နောက်ဆုံးသူမဟာဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ဆီသွားပြီးဆုတောင်းပြီးဆုတောင်းခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးသူမအဖြေရလိုက်တယ်2ညီမနှင့်ယောက္ခမကိုကြောက်ရွံ့သောဘုရား၊!! သင်၏အကြိုက်များကိုဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌မထည့်သင့်ပါ၊!!
Nahledge • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
post post fam!
မိုက်ကယ် • အောက်တိုဘာလ 8, 2014 တွင် 4:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဲလက်စ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒံယလေ Troutman • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တမ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သူမ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 6:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Terrell • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Carina • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင် ဦး ဆောင်လမ်းပြသည်, ငါတို့လိုက်သင့်တယ်. ငါပြောတာကငါတို့အားလုံးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးလို့ပြောကြတယ်, ပထမ ဦး ဆုံးအာဒံနှင့်Eveဝမှနောက်ပိုင်းတွင်နော of မှဆင်းသက်လာသူအားလုံး. နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ ရာပေါင်းများစွာသောလူတို့သည်ပြန်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ကြာနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်နေရာတည်းမှစတင်ခဲ့သည်. ပြိုင်ပွဲတစ်ခု, လူမျိုးစုအများအပြား.
Britta • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါလုံးဝသဘောတူ! ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့မတွေ့ခင်မှာမုတ်ဆိတ်ရိတ်တဲ့အနီရောင်ခေါင်းတွေကိုအမြဲတမ်းနှစ်သက်ခဲ့တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ငါတွေ့ခဲ့တယ်. သူကငါ့ကိုဆံပင်ရှည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဆိတ်သငယ်နှင့်အတူပြောင်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်! သူ / ကျွန်မယောက်ျားတစ် ဦး ၌ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်ငါ့ကိုကတိထားတော်အရာအားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့အသွင်အပြင်တစ်ခုရှာနေတာပေါ့၊ ငါ့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးအရာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်!
David B • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီဟာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်. ငါလက်တွေ့မှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းလို့မရပါဘူး, ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်၌ကျေးဇူးပြုခြင်းဖြစ်သည်, စာအုပ် Trip နှင့်ဂျက်စီကာအားဖြင့် cowritten ဖြစ်ပါတယ်!
လဲလှယ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤအံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါးအတွက်ခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. မင်းကိုရိုးသားဖို့, ငါသည်သင်တို့၏ဇနီး၏အပြေးပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါငါတော်တော်အံ့သြသွားတယ်. ဒါပေမဲ့, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်များရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်, ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများနှင့်အမြဲမကိုက်ညီပါ. ဒါကြောင့်, ဒီဆောင်းပါးကကျွန်မကိုဆုတောင်းပြီးစိတ်ရင်းမှန်ရှိဖို့အားပေးတယ်; ဒီတော့မှန်ကန်တဲ့လူကငါ့လမ်းတစ်လျှောက်လာတဲ့အခါ, ကြံရွယ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ပါက, ငါအဆင်သင့်ပဲ. နောက်တဖန် bro ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ယေရှုနှင့်သင်၏ရင်းနှီးမှုကိုချစ်ပါ. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
ရာခေလ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 1:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ငါသည်ဤဘာသာရပ်ပေါ်တွင်သင်၏ပွင့်လင်းရိုးသားနှလုံးအဘို့ငါကျေးဇူးတင်မိပါတယ်, ငါသေချာပါတယ်အဖြစ်ကအလုံအလောက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမပေးပါ! ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအတူတူပါပဲ “လူမျိုး” ဒါပေမယ့်ငါဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လူမှုအဆင့်အတန်းလိုမိုက်မဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုတွေ့နိုင်တယ် (သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲ), သူတို့သားသမီးရှိပါက, သူတို့အတိတ်ကဘာတွေလဲ, မသက်ဆိုင်ဘဲသူတို့ခရစ်တော်၌ရှိကြ၏သို့မဟုတ်မ. ငါနေပါစေမိမိအပြေးပြိုင်ပွဲကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်လက်ထပ်မယ်လို့တစ်အချက်ကိုငါသိ၏, status, သို့မဟုတ်နောက်ခံ. ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကျေးဇူးတော်သည်အရာရာတိုင်းကိုဖုံးအုပ်ပြီးအရာအားလုံးကိုအသစ်နှင့်လှပစေသည်. မင်းပြောသလိုပဲ, ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုလုပ်သည်ထက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလိုအပ်သည်ကိုသူသိသည်. ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!!
ပေါလုက • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Crystal • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လုံးဝလှပသော. မင်းရဲ့ ဦး စားပေးမှုတွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမင်းရဲ့အကြိုက်တွေကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုမင်းပြောခဲ့တာကိုငါနှစ်သက်တယ်. ဘုရားသခင်သည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်, သူသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းမှထွက်ရန်လိုသည်, သူတို့ကိုလက်ခံပြီးတန်ဖိုးထားပါ. ငါလူမျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်။ လျော့နည်းဂရုမစိုက်နိုင်သူလူမည်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး. ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်မှာလူများကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူသကဲ့သို့သူ၏အလိုတော်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းရန်ဖြစ်သည်. ဒါပဲ. သူကငါတို့ရဲ့ဖန်တီးသူပါ, ကျနော်တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားဖြစ်ဘယ်သူဖြစ်ကြသည်?
သမင် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လူတွေဖတ်ဖို့လိုတဲ့ဂရိတ်ဘလော့ဂ်. ငါလက်ဘနွန်အာမေးနီးယားလူမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်မခင်ပွန်းကလူမည်းဖြစ်ပြီးကျွန်မတို့မိသားစုထဲမှ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုများစွာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်.
ငါလူမျိုးစုတစ်ခု ဦး စားပေးခဲ့ဘူး. ငါကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်မီငါရှိခဲ့ပါတယ်3ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများ၏လေးနက်သောဆက်နွယ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးခရစ်တော်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကြီးထွားလာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည် “ခေါ်ခဲ့သည်” နှင့်အတူ; ဘုရားသခင်၌ရှိသည်ကား၊ “ထုံးစံ” ကျွန်တော့်အတွက်.
ကျွန်တော့်ဘဝအတွက်ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကကျွန်ုပ်ဘဝအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းအားဖွင့်ပြသောအခါသူ၌ကျွန်ုပ်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ရပ်တည်မှုကိုသိရှိခြင်းတို့သည်အရေးကြီးသည်။. ကျွန်ုပ်မိသားစု၏နှလုံးသားပျော့ပြောင်းလာစေရန်ဆုတောင်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအဆုံးတွင်အရေးကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်ဘုရား၏လမ်းတော်၌ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အခြားနေရာမရှိ။.
မိုက်ကယ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ခရီးစဉ်ကိုကြီးစွာသောဖြစ်ခဲ့သည်. ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လူမျိုးစုစိတ်ဝင်စားခံစားခဲ့ရဖူးဘူး, ဟစ်စပန်းနစ်, ငါမူကားငါ၏ယုံကြည်ခြင်း၌ပိုမိုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအသားအရေသည်အရေးမပါကြောင်းကိုကျွန်ုပ် ပို၍ သိသာလာခဲ့သည်. ၎င်းသည်စာဖတ်ခြင်းအတွက်လန်းဆန်းမှုဖြစ်စေပြီးသင့်အားသူ၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန်သင်အားကူညီရန်ဤမျှကြီးမားသောအမျိုးသမီးကိုသူပေးခဲ့သောဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျအားလုံးအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Jarred • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်လူဖြူတွေပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏သား ဦး အတွက်သခင်ဘုရားကကျွန်ုပ်တို့ကိုမွေးစားခဲ့သည်. ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်လိုချင်သောအရာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်. ဒါဟာခွေးတစ်ကောင်ထွက်ကောက်နေကဲ့သို့နီးပါး. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ရွေးချယ်သောအရာသည်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဖြစ်သည်. ဘယ်လူမျိုးနဲ့မှပြproblemနာမရှိဘူး, သို့သော်, ငါကဘယ်မှာလဲသူတို့ကလူမည်းတွေကိုမုန်းတယ်. ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကကျွန်မတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေဆီကိုပြန်လာတဲ့အခါသူတို့အနက်ရောင်ကလေးမမွေးဖို့သူတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။. ငါမကြာခဏကြောင်းရွေးချယ်မှုနှင့်အတူနပန်းပါပြီ. ငါတို့မှန်တယ်? ငါတို့ရဲ့ကလေးကိုအဲဒီအမုန်းကနေကာကွယ်ပေးခဲ့တာ, သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌ဘုရားသခင်ကိုကစားခဲ့ကြသည်? ကျနော်တို့အခုရွေးချယ်မှုနှင့်အတူအဆင်ပြေပါတယ်, ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်မင်းဘယ်လိုထင်သလဲ?
DeeDee • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 6:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်းရဲ့ post ကိုငါဖတ်တယ်… ငါကလူမည်း, နှင့်အဖြူနေသောငါ့မိဘများကမွေးစားခဲ့သည်. အမှုကိုင်တွယ်သူတရားသူကြီးပင်အနက်ရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်. အမေနဲ့အဖေကကျွန်မတို့ကိုမွေးစားခဲ့တဲ့မွေးချင်းမောင်နှမတွေကလူတွေရဲ့မလိုမုန်းထားမှုကနေကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. ဒါကဆိုပါတယ်ခံရ, ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြ၏, နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအခြေအနေများကြုံတွေ့ရဘူး.
သင်နှင့်သင်၏ဇနီးသည်သည်သင့်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုလုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်. တစ်ခုချင်းစီကိုအခွအေနေထူးခြားတဲ့သည်နှင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဘဝရဲ့သေးငယ်တဲ့နှင့်ကြီးမားသောအချိန်လေးသွားလာရန်ကျေးဇူးတော်အတိုင်းအတာပေးသည်. အားပေး! ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ, ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်နောက်တဖန်မွေးစားခြင်းနှင့်အနက်ရောင်ကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ် (သို့မဟုတ်အခြားလူမျိုးရေး) ကလေး! ဘုရားသခင်သည်သင်၏နှလုံးကိုသိတော်မူသည်, သူသည်ယခုအချိန်တွင်ပင်သိ၏.
Cece • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 7:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ရဲ့အဖြူရောင်မိဘတွေမွေးစားတဲ့မိသားစုကနေလာတာ6အနက်ရောင်ကလေးတွေ. မင်းရဲ့လူမျိုးအပြင်ဘက်မှာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မွေးစားခြင်းဟာမင်းရဲ့ကလေးကိုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်တို့အားလုံးအမှန်တကယ်အသိအမှတ်ပြုဖို့အလွန်ရိုးသားတယ်လို့ငါထင်တယ်, နှင့်သူတို့၏အနက်ရောင်စူးစမ်း. ဘုရားသခင်ကလူမည်းတစ်ယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်သင့်အားအမှန်တကယ်ခေါ်ခဲ့လျှင်, ထို့နောက်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှသင်၏မိသားစုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်မလွယ်ကူပါ. သို့သော်, မေးခွန်းများကိုမေးရန်လိုအပ်ပါသည်, ငါ့ကိုအကြောင်းပိုမိုမွေးစားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်အိမ်လိုအပ်သောကလေး? ကျွန်ုပ်၏လူမျိုးအပြင်ဘက်တွင်ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံမှတန်ပြန်မှုများကိုကျွန်ုပ်ခံရပ်နိုင်ပါသလား? ကျွန်ုပ်သည်ကလေး၏ကြီးပြင်းလာစေရန်မျှော်လင့်နေသလား၊ သူတို့မိသားစုသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်တွန်းအားပေးနေသည်? ကျွန်ုပ်၏ကလေးများသည်ကမ္ဘာကြီးအကြားနေထိုင်ခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာအားဖြင့်နပန်းလုံးနိုင်အောင်နေရာလွတ်ပေးမည်လား? လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ထူထောင်ထားသလား၊ ကျွန်ုပ်သည်လူဖြူဖြစ်ခြင်း၏ကလေးအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စိတ်ဝင်စားမှုကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်? ဒီမွေးစားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်?
ကလေးတစ် ဦး ကိုမွေးစားခြင်းသည်စိတ်သဘောထားအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုသည်, သင်၌ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်သည်သင့်ကလေး၏လိုအပ်ချက်ကိုမထောက်ခံပါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း. သင်ဘယ်တော့မှအပြည့်အဝစကားမပြောနိုင်သည့်ရှုထောင့်မှလာသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည် (အနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်း). ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမျိုးရေးခွဲခြားသောကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ကြသည်, ၎င်းကိုသင်နှင့်သင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသောကလေးသည်အလွန်သတိထားရမည်. သင်ကြောင်းအသိအမှတ်မပြုရန်ရွေးချယ်လျှင်, ထို့နောက်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်မွေးစားခံရသောကလေးအားနစ်နာမှုများစွာပြုလုပ်နေသည်. မွေးစားခြင်းသည်သင်ဆင်းရဲသောအနက်ရောင်ကလေးငယ်ကိုကယ်တင်ရန်အကြောင်းမဟုတ်ပါ. သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်စိတ်လှုံ့ဆော်ခံရပြီးသင်၏အိမ်နီးချင်းကိုပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်နှင့်ချစ်ရန် g ၀ ံဂေလိတရား၏နှလုံးသားထဲမှအမှန်တကယ်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။. ဒါကမင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, လူဖြူတစ်ယောက်လို.
နည်းလမ်းများစွာတွင်၎င်းသည်သင်ရင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်သည့်မေးခွန်းအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်. သင်ဤသည်ခံနိုင်ရည်နှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးအဆင်သင့်မဖြစ်လျှင်, ထို့နောက်အနက်ရောင်ကလေးကိုမမွေးစားခြင်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. ငါဆွေးနွေးပွဲသို့ပြိုင်ပွဲများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့်မွေးစားသူများနှင့်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုတစေ့တစောင်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤအရာများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာမေးမြန်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တင်ခဲ့သည်။.
ဇာတ်လမ်းတိုင်းကအောင်မြင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မဟုတ်ဘူး၊ မကြာခဏဆိုသလိုဒီအကြောင်းတွေကိုကြားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး. ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများနှင့်မိသားစုအတွက်ကံကောင်းသည်. နညျးလမျးမြားစှာခုနှစ်တွင်, ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသောမည်သူဖြစ်ကြောင်းစူးစမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာဖြင့်ခွင့်ပြုထားပါသည်, သို့သော်, ငါကကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကြွလာတော်မူကြောင်းကိုငါသိ၏ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုရန်အဘို့အနေရာစွန့်ခွာရန်လိုအပ်သည်.
Kara • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟားဟား! “အကြှနျုပျ၏အဓိကဦးစားပေးကြှနျုပျ၏မယားဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီဖြစ်ကြောင်းခဲ့သည်, နှင့်ဂျက်စီကာခဲ့သည်. ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါ wifed ။” ဘလော့ဂ်အတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်း. ၀ မ်းမြောက်စွာဘုရားသခင်ကသင့်အားဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်. :)
John Evangel • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အချိန်ကြာမြင့်စွာစာဖတ်သူကို & နားထောင်သူ. ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှတ်ချက်ပေးသူ. ငါဒီဆောင်းပါးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်.
ငါ့မိသားစုကနိုင်ဂျီးရီးယားပဲ, အဖေကအင်္ဂါနေ့မနက် ၄ နာရီမှာကျပန်းစာတစ်စောင်ပို့လိုက်တယ် “သင်လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်နှင့်အတူတူနောက်ခံမှသူတစ် ဦး ဦး ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ. အများဆုံးမှာ, တူညီသောနိုင်ငံ။”
ဒါပေါ့, ငါဘာပြောရမှန်းမသိခဲ့ပါ, ငါတို့အရင်ကဒီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမဖွင့်လို့ပဲ. #အဆင်မပြေ.
ငါ့ဇနီးကိုငါချစ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်, ငါအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, မသက်ဆိုင်အသားအရေ, လူမျိုးရေးနောက်ခံ, ဘာသာစကားအခက်အခဲ, နှင့်အခြားဖြစ်နိုင်သောကွဲပြားခြားနားမှု. ငါ့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူမသည်ကျွန်ုပ်မိသားစု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် – ဘုရားသခင့မိသားစု. အဲဒါလုံလောက်ပါတယ်.
တေးလ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 6:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Hahaha. Naija မိဘများသည်အိမ်ထောင်ရေးတွင်ခက်ခဲနိုင်သည် . သို့သော်အချို့ကသင်အိမ်ထောင်ပြုသူကိုဂရုမစိုက်ပါ
ကွမ်းခြံကုန်း • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မိတ်ဆွေများက • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်၏နှလုံးဝေငှခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. အရေပြားကိုချွတ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတူတူပဲ. ဘုရားသခင်သည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုမိမိ၏အထူးဒီဇိုင်းအတိုင်းညီတူညီမျှ၊. ဘုရားသခငျသညျသင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေး.
JoshHaan • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခင်ဗျားလိုမျိုးဘာမှမမှားဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်၊. အရေးအကြီးဆုံးကတော့မင်းဘယ်သူ့ကိုငါလက်ထပ်မယ်ဆိုတာကယေရှုကိုချစ်တဲ့သူပဲ (အမှတ် 12:30 တော်မူ၏) သူတို့သည်ဘုရားသခင့်အသင်းတော်ကိုချစ်သကဲ့သို့သင့်ကိုပြန်ချစ်မြတ်နိုးမည်. Trip နဲ့သင့်မိသားစုကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
MichaelJ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သခင်ဘုရားသည်အစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပုံ “ငါတို့စိတ်နှလုံး၏မျက်စိ” နှင့်အတူ align ရန် “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး ခေါင်း၏မျက်စိ”. ငါစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်, ငါသေးလက်ထပ်မဟုတ်သော်လည်း, အကြောင်းမှာမိမိ၏ကယ်တင်ရှင်ကိုနှစ်သက်စေလိုသောဘုရားတရားကြည်ညိုသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အပြင်ပန်းသွင်ပြင်များထက် ပို၍ အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်. သင်တို့ရှိသမျှသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်ဘုရားသခင်သည်ကြွင်းသောအရာကောင်းကြီးပေးဆက်လက်စေနိုင်သည်.
JB • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့ကို Trip ကိုနားထောငျ, ကောင်းသော post.
ကဗျာ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Nolan • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! တကယ်ပဲသင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်အားဖြင့်အားပေးတယ်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်စတင်ရန်ငါ့ကိုမှုတ်သွင်း! ကြေးဇူးတငျစကား.
OJ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
arthur simuchile • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါတို့ရှိသမျှသည်အဘတပါးတည်းရှိသော်လည်း၊ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်အားဖြင့်၊,အသားအရေရုံအရေပြားဖြစ်ပါတယ်,ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းပိုင်းရဲ့အရှိဆုံးအရေးပါသည် ,အံ့ ull စရာကောင်းလှသည့် Mr Trip Lee.may ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုသင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ကောင်းချီးပေးပါမည်.
နေပြည်တော် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:29 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! မင်းလက်ထပ်ပြီးသူမအဖြူရောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာမင်းမသိဘူး, အနက်ရောင်အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ဘုရားသခငျ၏အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်, အချစ်စစ်ရှာဖွေခြင်းကိုချီးကျူးခြင်း! မင်းဇနီးနဲ့ဘာကြောင့်လက်ထပ်တာလဲလို့မင်းဘယ်လိုရှင်းပြခဲ့တယ်ဆိုတာငါသဘောကျတယ်, နှင့်သင်အမှန်တကယ်လည်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ, ဒါပေမယ့်သင်ပုံပြင်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ! ဒါဆိုမင်းအစ်ကိုနဲ့မင်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးဂျက်စီကာတို့အတွက်ပါ, ငါသည်သင်တို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာယောက်ျားတွေအလိုရှိ၏! မင်္ဂလာရှိပါစေ!
အဲလစ်ဇဘက် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်တစ် ဦး အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အချက်ပါစေ! မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကနေအသားအရေကိုအရေးမပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်နဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးဆိုတာမင်းရဲ့ဆောင်းပါးကနေငါလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်!! လှပသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဝေမျှပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ဂျင်မီ Sorrells • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကပြီးပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်. အဘယ်အရာကိုအသိလုပ်မထားဘူးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြစ်ပါတယ်. တစ် ဦး တည်းသာပြိုင်ပွဲရှိကတည်းက, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆိုတာလူသားမျိုးနွယ်ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်. ကွဲပြားသောလူအုပ်စုများရှိသော်လည်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုသာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အမှန်တရားကိုဆွေးနွေးသော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သောလူများနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပုံရသည်.
တိမို • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:33 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကို, ခရီးစဉ်ကို!
ဂျက်ဖ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ထိုကဲ့သို့သောစစ်မှန်တဲ့လေးနက်ကြေညာချက်. ငါ့အဖေကအမည်းရောင်, အမေကဖြူတယ်, သူတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြသည် 35 အနှစ်. အချို့သောကြမ်းတမ်းသောနှစ်များလည်းဖြစ်သော်လည်းထိုပconflictsိပက္ခများ၏အလယ်တွင်, “အသားအရေ” အများဆုံးကျိန်းသေအရေးမပါဘူး. ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘော၊.
ခရီးစဉ်ကို, ဒီ post bro လန်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်မ၏ပထမဆုံးအိမ်ထောင်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့သည်ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောဇနီးနှင့်သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုမှကင်းဝေးခြင်းဖြစ်သည်. သူမသည်လည်းလက်တင်အမေရိကရှိသူဖြစ်၏, ပြင်သစ်နှင့်ဟာဝိုင်ယီလျောက်ပတ်သော. ဒါကြောင့်ဒီဖတ်တာအများကြီးတန်ဖိုးထားခဲ့သည်.
Walter • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မြင်ချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲငါအနက်ရောင်ပါဘောင်အပြင်ဘက်မှာပဲစဉ်းစားနေတယ်။ ငါကပြေးပြိုင်ပွဲမှာလက်မထပ်ချင်ဘူး၊ တခြားအမျိုးသမီးတွေလိုငါအကြောင်းပြချက်လည်းမရှိဘူး။
Michelle • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤကိစ္စအတွက်အလင်းဖြန့်ဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. အဖြူရောင်လား, အနက်ရောင်, စသည်တို့ကိုသင်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအရာကိုအပေါ်ထိမိပါတယ်. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစိတ်ဓာတ်ကနေရာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြာရှည်စွာနှေးကွေးစေခဲ့တယ်. ကျနော်တို့မည်သို့ပင်ဆိုစေချိုးဖောက်နေကြသည်ယုံကြည်ပါတယ်. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ & သင့်ရဲ့ကြီးထွားလာမိသားစု.
ချယ်ရီ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ပုံပြင်နှင့်ဆင်တူ. ကြေးဇူးတငျစကား4တင်ပါတယ်
Bachizzle • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအတွေးရှိတယ်, ကျွန်ုပ်ကအမေရိကန်သားပါ ( အိန္ဒိယ) မင်းရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုငါကြည့်ပြီးခရီးစဉ်ကိုဘယ်လိုသွားသလဲ. ငါတောင်ပိုင်း sem မှာလေ့လာခဲ့သည်. လူတွေကငါ့ကိုဘယ်တော့လက်ထပ်ကြမလဲလို့ငါ့ကိုမေးတယ်? ငါနဲ့တုန့်ပြန် “အချိန်မှန်သည်နှင့်ငါမှန်သောအခါ”. ငါမျက်စိဖွင့်ထားစောင့်ရှောက်ကြဘူးငါဆိုသည်ကား “ငါသူမသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂုဏ်ပြုပါလိမ့်မယ်ကြောင်းယေရှုနှင့်အတူဤမေတ္တာ၌ဤကဲ့သို့သောသူဖြစ်လိမ့်မည်သူကိုဘုရားတရားကြည်ညိုသောဇနီးချင်တယ်”. ပြီးတော့လူမျိုးရေးပြissueနာတက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကတော့ယေရှုကိုဂုဏ်တင်တဲ့ဇနီးသည်ဟာငါကဲ့သို့သောဇာတိအမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်တွေ၊ pentacostalism နှင့် matriarchial စနစ်၏ဇာတိအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့်ရှာရန်ခက်ခဲသည်။. မင်းရဲ့စကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
CoriH • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီ post ခရီးစဉ်ဖတ်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်. ငါကမင်းရဲ့ပရိသတ်ကြီးပါ, ဒါပေမယ့်ငါကမင်းပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကြိုက်တယ်. ရိုးရိုးသားသား, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လက်ထပ်သူကိုမှကြွလာသောအခါပြိုင်ပွဲအရေးမသငျ့သညျ. အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့သည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကဖြစ်သည်, သင်၏အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ကိုက်ညီပါက. အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၏အပြင်ဘက်တွင်, အသားအရောင် (သို့) အရေပြားအရောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုပုံနှင့်ကွာခြားသည်. ငါပြိုင်ပွဲပြင်ပရက်စွဲ. ကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော့်ဟောင်းကိုရီးယား / အဖြူရောင်ပါ. ဒါဟာငါတို့အဘို့အပြanနာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်, ငါတို့မူကားအခြားသူများထံမှငေးကြည့်နေသည့်အချိန်ကိုငါသတိရမိသည်. ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ, ဒါပေမယ့်အဆိုးမြင်အဘယ်သူအားမျှ (အရာအများကြီးမဟုတ်ခဲ့) ကျွန်တော့်ကိုလူမျိုးစုအပြင်ဘက်ကတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့တာ၊ လက်ထပ်တာကိုတားဆီးလိမ့်မယ်. ဒါကငါနှင့်အတူပြanနာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်, ငါ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေ. အဆိုပါအချက်ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးရှိသည်, ငါတို့မူကား၊ ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုရှေး ဦး ထားရမည်. ဒီစကားဝိုင်းကအပြုသဘောဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်.
ပေါလုက • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခဲ့သည့်အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏, ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူရာကိုအပြည့်အဝပွင့်လင်းရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်, သူသည်သင်၏ဘ ၀ သို့ ၀ င်ခွင့်ပေးပြီး၎င်းမှထုတ်ယူလိုက်သောသူအပါအ ၀ င်. ငါသည်သင်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောကြေညာချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် “ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအင်ဆန္ဒများကိုအိမ်ထောင်ဖက်တွင်ဘုရားသခင်အလိုရှိသည့်အရာအားတင်ပြရမည်”. ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အားဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ အတွက်ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနှင့်သိနားလည်မှုကိုပိတ်ပစ်ရန်ကူညီသည်. ငါလူမည်းဖြစ်ပြီးလူမည်းတွေကို preferenced လုပ်တယ်; သို့သော်ဘုရားတရားကြည်ညိုသောခင်ပွန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်သူ့ကိုရှာစကတည်းကဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုရှာဖွေသည်. ကန့်သတ်ချက်များ / ဦး စားပေးမှုများကြောင့်ရိုးရိုးသားသားလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် (သို့) ဘုရားသခင်အတွက်သူတို့အတွက်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုလက်လွှတ်ရန်ပင်ရွေးချယ်သူမည်မျှရှိသည်ကိုစဉ်းစားပါ။. ဂရိတ်ဆောင်းပါး! ဒါဟာငါ့ကိုအမှန်တကယ်ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ငါများစွာသောအခြားသူများသေချာပါတယ်.
စကိတ်စီး • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တောင်ပိုင်းကနေဖြစ်ခြင်းနှင့် biracial, ငါလူမျိုးရေးချိန်းတွေ့နှင့်ပတ်သက်။ ပconflictsိပက္ခများကိုအများကြီးဆက်ဆံပါတယ်. ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်၏လှပသောကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းမှအချို့သည်အမှားတစ်ခု (သို့) ယုတ်ညံ့သောအသုံးအနှုန်းဟုယူဆသောအရာများဆီသို့ကျွန်ုပ်သွားနိုင်သည်. သင်ဤအပေါ်အထဲကစကားပြော Preciate! ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်သင်ဇနီးတစ် ဦး အပြန်အလှန်လက်ခံသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းကကျွန်ုပ်ကိုလက်ခံသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါ! 116!
ဂျွန် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသော post ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျနော်တို့သေချာတဲ့အရောင်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုနောက်ခံကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင်းမဟုတျကွောငျးထင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ဖို့အသုံးပြုကြသည်အရာဖြစ်တယ်. သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားသင်၏မျက်စိကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ကောင်းသောအရာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်. Congrats bro.
ဆက်လုပ်ပါ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ရစ်ကီ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကိုခရီး! လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက်theဝံဂေလိတရား၌နေရာမရှိပါ.
ဒံယလေ Troutman • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီ post ကိုရေးဖို့သင့်ကိုအေးမြပြီးအသိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လူမျိုးနွယ်စုများနှင့်လူမျိုးစုကဲ့သို့သောအသေးအဖွဲအမျိုးအစားများကိုမသိသောသူတို့အားကူညီသည်. 1 ကောရိန္သု 13 ပြိုင်ပွဲအကြောင်းဘာမှမပြောပါဘူး; သည်းခံခြင်းအကြောင်းပြောထားသည်, နှိမ့်ချမှု, ဉာဏ်ပညာလည်းရှိ၏. အလွန်ကြီးစွာသော post ကိုများအတွက်ကြီးမားသော ups!
လိမ့်မည် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 2:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ညာဘက်အပေါ်! ဒါကကောင်းချီးတစ်ခုပါပဲ. ငါမေးတယ်, စိတ်ပျက်မျက်နှာများကိုမြင်တော်မူ၏, ငါဘာလို့ / ဘယ်လိုငါအခြေချသို့မဟုတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြောနေတာရှေးရှေးကြားဖူးတယ် “ကြာပွတ်”. ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောမိန်းမအတွက်ငါဆုတောင်း။ ၊. အဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော့်ဇနီးကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ် (ငါကလူမည်း). သူမ & ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသည်ဘုရားသခင်ထံမှကျွန်ုပ်၏အကြီးမြတ်ဆုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်. ပွင့်လင်းရိုးသားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကျော်လွန်ပါဘူး.
ဗိုလ်မှူး • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်ပုံပြင်ခရီးစဉ်နှင့်ဂုဏ်ပြုလွှာ. ငါသည်သင်တို့ကိုဇနီးတစ် ဦး ၏ရှေးခယျြမှုအနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်မှားယွင်းတဲ့သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးတစ်ခုခုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလုပ်ပါပြီမယ်လို့အလိုရှိ၏. ထိုအဖြစ်အပျက်သည်ထိုဒေသတွင်ပျက်ပြယ်သွားသည်. လည်း, သင်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသင်ရွေးချယ်ခြင်းသည်လူမည်းအမျိုးသမီးများနည်းပါးသောအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်သည်. လူမည်းအများအပြားသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင်လူနည်းစုများအဖြစ်နေထိုင်ကြပြီး၎င်းသည်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုသာသက်ရောက်မှုရှိသည်. ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအရည်အသွေးမြင့်အနက်ရောင်ယောက်ျားနှင့်အတူအနက်ရောင်အမျိုးသမီးတွေကြည့်ဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါဘုရားသခငျသညျအတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ရာနှင့်အတူငြင်းခုန်လို့မရပါဘူး. သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဆန္ဒများ b
ဒါဝိဒ်သည် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Excellent ကဘလော့ဂ်. ငါအသုံးအနှုန်းသုံးစွဲဖို့ရှိသည်သွားတယ် “မင်္ဂလာပါ” ယခု. လေးစားစွာ, ဒါပေါ့.
Sean • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော့်မိန်းမ & ကျွန်တော်အဖြူရောင်ပါ… ငါတို့မှာရှိတယ်3ကလေးငယ်များ 1 အာဖရိကသား (အီသီယိုးပီးယား). ကျနော်တို့တူညီတဲ့မေးခွန်းများကိုနှင့်ထူးဆန်းစိုက်ကြည့်အချို့, သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစုတစ်ခုအဖြစ်ဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်!
သင်၏ဘဝအတွက်ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ရိုးသားမှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုငါတန်ဖိုးထားသည်… ငါထင်သည်သင်၏ဆောင်းပါး၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည် – ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒကိုရှာဖွေခြင်း!
ဤကျမ်းစာအယူအဆသည်ဖြစ်နိုင်သည် “ကူးယူထားသည် & ငါးပိ” ယုံကြည်သူများ၏ဘဝကဏ္ aspect တိုင်း၌ဖြစ်သည်… နှင့်သင့်ပါတယ်!
JHolla • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:10 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်းရဲ့မျှဝေလိုစိတ်အတွက်မင်းကိုချီးကျူးပါတယ် “အကြောင်းပြချက်များ” ပြိုင်ပွဲပြင်ပလက်ထပ်ဘို့. ငါ့ပထမအတွေး, အာရှအမျိုးသမီးတစ် ဦး မှလက်ထပ်သောသူသည်, ဒါကိုဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်သင့်ဘူးလို့ဘာကြောင့်ခံစားရတာလဲ. ဒါပေါ့, မိုင်းနှင့်ငါ့ဇနီးရဲ့’ အသားအရေတူညီသည်, ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ခံနှင့်ကြီးပြင်းလာမှုသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဝေးကွာသည်, မည်သူမဆိုပြောနိုင်ပါတယ် “မင်းဘာလို့သူမကိုလက်ထပ်တာလဲ?”မင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း, သင်၏မယားကို, မိန်းမဖြစ်သည်, အဖော်, အခြား (ငါ့ဇနီးစာဖတ်လျှင်, “ပိုကောင်း”) သူပေးတော်မူပြီတစ်ဝက်. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ရှိသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိရန်လိုအပ်သည်, ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်နိုင်ရန်အတွက်. ဒီတော့အပြင်ကလူတစ်ယောက်ကငါနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုလျှင်ကော. သင့်လိုပဲ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သောအလှပဆုံးဂုဏ်သတ္တိများကိုနှလုံးသားရှာသောဘုရားသခင်နှင့်အတူရှာဖွေသင့်သည်.
ရှိခြင်း • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကို. ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ခရစ်ယာန်များစွာဟာအထူးသဖြင့်တစ်ကိုယ်ရေခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် (ငါကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည်) ငါတို့ရဲ့ရေတိမ်ပိုင်းအတွေးအခေါ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်လက်ထပ်မယ်၊. မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးဆုတောင်းချင်သောဘုရားသခင်အားစတင်ဆုတောင်းခဲ့သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်သောအရာများကိုသူသိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ခမည်းတော်ကိုယုံကြည်ရမည်. အဓိကကတော့ငါဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုချင်တယ်။ ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒတွေနဲ့ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပေမယ့်ပြိုင်ပွဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလဲငါသဘောကျတယ်။. ဘုရားသခင့ကောင်းချီးပေးပါစေ
နီကိုးလ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်ပြရုံတင်မကဘဲအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်, ဒါပေမယ့်အခြားသူများနားလည်လိမ့်မည်ဟုတစ်လမ်းအတွက်အဲဒီလို. ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်ကိုစတင်ပြောင်းလဲသောအခါ, ငါတို့တွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ် “မျှော်လင့်ထား” ခမည်းတော်၏အလိုတော်နှင့်မပတ်သက်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့သည်သူနှင့်နီးကပ်လာလေဖြစ်သည်, ငါတို့ပို။ ပို။ “မျှော်လင့်ချက်များ” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘဲသူ့အလိုတော်နဲ့စတင်လိုက်ကြလို့ပါ. သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ. ခရစ်တော်၌ငါ့ညီကိုပြုသည်အတိုင်းသင်တို့ပြုကြလော့. အနက်ရောင်, အဖြူသို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်, ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အရောင်သည်အခန်းကဏ္playsတွင်မရှိ. ဘုရားသခင်ရဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လူတစ်ယောက်ကိုငါကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်, သူကငါ့လူမျိုးပဲ, ဒါပေမယ့်သူကငါ့စာအုပ်ထဲတွင်အရေးပါသမျှသောဘုရားသခငျ၏စိတျနှလုံးအောကျ၌လူတစျ ဦး ဖွစျသညျ.
Andrea • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခရီးစဉ်! ဒါဟာငါ့ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်တွေအကြောင်းတွေးမိအောင်ငါတကယ်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်. မာန၏ပြissuesနာများမှအချက်များ. ဒါပေမယ့်တကယ်လူမျိုးရေးဆက်ဆံရေးကိုထောက်ပံ့သောမှတ်ချက်များအားဖြင့်တကယ်ပဲအားပေးတယ်. ကျွန်ုပ်၏မိသားစုသည်ဤအမြင်များကိုမျှဝေလိုပါက. ငါလူမည်းတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်လျှင်, ဒါကြောင့်လွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
ဂျေဆန် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဟာမင်းရဲ့အသားအရောင်နဲ့လူမျိုးစုအတိတ်ကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်. လူတွေကြောင်းကိုင်လျှင်နှင့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်၎င်းတို့၏ပြိုင်ပွဲအတွင်းနေဖို့လိုတဲ့အခါငါမခံမရပ်နိုင်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်၏ဒဏ်ကိုခံရသည့်အသားအရေအမျိုးမျိုးရှိသူများဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးမှာစပိန်လူမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လူမည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမကိုဘယ်တော့မျှမကြည့်ပါ၊, ငါသူမကိုကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်, မသက်ဆိုင်အသားအရောင်သို့မဟုတ်လူမျိုးစု၏.
MrsHendrix • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာမင်. ငါသည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်. တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံမှုရှိသည်, ကိုယ်တော်၏အလိုတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုတော်ဖြစ်လာပြီးသင့်အလိုတော်သည်သင်၏ဇနီးသည်ကိုဇနီးနှင့်ခင်ပွန်းပြုရန်ဖြစ်သည်…. (ကြောင်းပင်သဘာဝကျပါတယ်လျှင်). သူကသူမကိုအထူးသဖြင့်သင့်အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်. သူမဟာလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်အတော်အတန်များသောအားဖြင့်ဖမ်းမိတာဖြစ်နိုင်တယ် “အနက်ရောင်” dude, သင်တိုမူကား၊. သူ့ကို ဦး စွာရှာပါ (လက်ျာအိမ်ထောင်ဖက်အပါအဝငျ).
မင်္ဂလာရှိသောညီကိုနေပါနှင့်အခြားသူများကိုလည်းကောင်းချီးတစ်ခု ဆက်၍ ပေးပါ.
Leilani Bailey • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 3:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင့်အိမ်ထောင်ရေးပcovenantိညာဉ်သည်အရောင် (သို့) လူမျိုးရေးမပါ ၀ င်ပါ. ကိုယ်တော်၏ထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အားလုံးထက်သာလွန်သည်။.
Stacy • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 4:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်ဤတင်လိုက်သောကြောင့် ၀ မ်းသာပါသည်. တစ် ဦး ဘက်မလိုက်လူမျိုးရေးလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ထုတ်ကုန်နှင့်သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုထင်ဟပ်မထားဘူးသောယောက်ျား၏မယားအဖြစ် :) ဒီခေါင်းစဉ်ဟာငါ့အတွက်အရမ်းကိုမှန်ကန်တယ်. ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်, ပြီးတော့သူတို့မသိတာတွေ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကြောင့်ဘုရားသခင့်ထံမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုငြင်းပယ်မယ့်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။.
အကြိုက်ဆုံးလိုင်း: “ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါ wifed ။” ဟားဟား!
နာတာလီ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 4:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဆောင်းပါး, မင်းနဲ့တူတဲ့သူတွေလိုပဲဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဆိုမှုကိုဖွင့်လှစ်ပြီးအစစ်အမှန်ဖြစ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ငါဝမ်းမြောက်တယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းလူမျိုးရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမည်းစက်ရှိပုံရတယ်.
ငါကတရုတ်လူမျိုးပါ, ငါတို့အတူတူခရီးတလျှောက်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောရုန်းကန်မှုများသည်တကယ့်ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. မင်းနဲ့မင်းရဲ့ဇနီးလိုလူငယ်လက်ထပ်လိုက်တယ်, ငါခဲ့သည် 21 သူဖြစ်ခဲ့သည် 24. ငါတို့မှာရှိတယ်2သမီးနှစ်ယောက်, အခါငါသူတို့နှင့်အတူတစ် ဦး တည်းထွက်, ငါလမ်း၌ရပ်တန့်ရလိမ့်မယ်နှင့်သူစိမ်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည် “အဖေကအနက်ရောင်ပါ?”
အားလုံးရုန်းကန်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူဖြစ်ခဲ့သည်, ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကလူမည်းတစ်ယောက်နဲ့ထိမ်းမြားမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး. ကျွန်မတို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြပြီးကျွန်မရဲ့မိသားစုတစ်ဝက်ကျော်ကလာဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတယ်. သို့သော်ဘုရားသခင်သည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်, ငါ့အမိ၏ယုံကြည်ခြင်းသည်စမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခံခဲ့ရသည်, ငါ့မိသားစုအတွင်းအတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်. ကျွန်မခင်ပွန်းကိုလက်ခံလိုက်ပြီ, ပြီးတော့ကျွန်တော့်အမေကသူ့ကိုယောက္ခမအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မယ် (ငါတို့အဘို့အကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်!) သွားကြဖို့အချို့သောလမ်းနေဆဲရှိပါတယ်, သို့သော်လည်းအများသောသူတို့သည်တိုးပွားများပြားသည် ဖြစ်၍၊ ငါသည်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း၏. ဒါကြောင့်တက်ထားပါ, သငျသညျအခွားသူမြားကိုလှုံ့ဆျောမှုဖွစျသျောလညျးဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏, သင့်မိသားစုနှင့်သင်၏ဓမ္မအမှု.
PS: သငျသညျလန်ဒန်မှာဖျော်ဖြေဖို့ဆင်းလာရန်လိုအပ်သည်, UK အချိန်အတန်ကြာ!!
LoganSharp • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 4:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အလွန်ကောင်းစွာဆိုပါတယ်. ကျွန်တော့်ဇနီးကဟစ်စပန်းနစ်ဖြစ်တယ်, ငါအဖြူရယ်. မင်းရဲ့ဇနီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမင်းပြောခဲ့တာတွေကိုလူမျိုးအတွက်ငါမစဉ်းစားခဲ့ဘူး; ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုငါမြင်တယ်, သူမကျောင်းသားများကိုအမှုဆောင်လိုသောဆန္ဒရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောရုပ်ရှင်နှင့်တေးဂီတများစွာကိုနှစ်သက်ပြီးချိန်းတွေ့စဉ်အချင်းချင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးသည်. လူတွေလူမျိုးရေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖြစ်ကြသည်ထင်အဘယ်ကြောင့်ငါမရကြဘူး “သဘာဝထက်သာလွန်သော”.
နတ်သမီး • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 4:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်! ခရီးစဉ်မျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှအထူးသဖြင့် preference ကိုပေမယ့်ကယ်နှုတ်တော်မူသည်. မင်းဇာတ်လမ်းကကောင်းချီးတစ်ခုပဲ.
LeonMartinez • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 4:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လှပသောသက်သေခံချက်! ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီဟာကကျွန်တော့်ကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ ငါလူမျိုးရေးအရ ဦး စားပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး, ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကိုဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်လို့စိတ်ချနေတုန်းပဲ, မလိုချင်ပါဘူး. သငျသညျစစ်မှန်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဘုရားသခင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ပါဝါ၏အသက်ရှင်သောသက်သေခံချက်ပါပဲ. ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏လှပသောကလေးငယ်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!
Reewantae • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 5:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါး, ခရီးစဉ်ကို! ဤနေရာတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှတ်ချက်ပေးသူ!
သင်ပြောသည့်အခါသင်အမှတ်ပေါ်ရောက်နေပြီ, “ဇနီးတစ်ယောက်အတွက်ငါလိုအပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇနီးတစ်ယောက်ရဲ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမထားခဲ့ဘူး။” တခါတလေ, ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်လျစ်လျူရှုခံရသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ပင်ကိုစရိုက်နှင့်စိတ်နေသဘောထားသည်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ငါသည်သင်တို့ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့မိပါတယ် “သဘာဝထက်သာလွန်သော” သို့မဟုတ် “ကွဲပြားခြားနားသည်” ငါသိများစွာသောလူအရသိရသည်. ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖက်ရှင်သို့အနည်းငယ်ပိုတက်လိုသောမိန်းကလေးတစ် ဦး သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ထက်လူမှုရေးနှင့်ပွင့်လင်းမှုရှိသူ. အခြားအချိန်များတွင်, ငါထင်တာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုနည်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလျော့နည်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်. သူများသည်နည်းလမ်းများပြိုင်ပွဲအပေါ်အခြေခံကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ် ဦး ၏နောက်ခံသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသူတို့ရဲ့ mode ကိုပိုမို… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကျောင်းကိုဘတ်စ်ကားစီးတယ်, ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ပရောပရည်လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါငါမသဘောမကျပါ. (အယူအဆကတော့ဘတ်စကားဒါမှမဟုတ်ရထားစီးနေတဲ့လူတစ်ယောက်လို, သင်တစ် ဦး ကားတစ်စီးရတ ဦး တည်းမောင်းဖို့မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်, မင်းမှာပိုက်ဆံနည်းနည်းပဲရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အမှားတွေကိုအကုန်သုံးနေတယ်, ဒါ့ကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုချိုမြိန်စွာပြောဆိုဖို့ကြိုးစားစရာစီးပွားရေးမရှိဘူး. ဟားဟား… ဒါပေမယ့်ဒီလည်းမှားသည်။) ကျွန်ုပ်အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင့်အလိုတော်၌တည်နေရန်ကျွန်ုပ်ကိုဘုရားသခင်ကူညီပေးပါရန်ဆုတောင်းပါ၏, ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကရှာတွေ့မှအချိန်လာသောအခါ “ကောင်းတဲ့အရာ,” ငါအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်. :)
ဇွန် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 5:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါပြိုင်ပွဲသူတို့အားပွင့်လင်းလက် ဦး စားပေးတစ်ခုဖြစ်သင့်ကြောင်းလုံးဝသဘောတူသည်, ဒါပေမယ့်ငါကသဘောမတူဘူး, သို့မဟုတ်အခြား ‘ဦး စားပေး’ ပconflictိပက္ခနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဓိပ္ပာယ်မရှိ. ကံမကောင်းသဖြင့်, ငါ့အတှေ့အကွုံအတွက်, ငါခံစားခဲ့ရတာကပွင့်လင်းတဲ့လက် preference ပဲ, ငါ့မျက်မှောက်၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကိုရသည် ဖြစ်၍၊,ကျွန်တော့်အိမ်ထောင်ရေးတင်းမာမှု၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်, နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာ, ကျွန်မခင်ပွန်းအလေးချိန် alot ရရှိသောအခါ, ငါပြီးသားစဉ်းစားသောအရာကို၏ထိပ်ပေါ်မှာအဝလွန်ဘောင်ဖြစ်ခဲ့သည်. ငါအမြဲပိုပြီးအားကစားအမျိုးအစားများကိုမှဆွဲဆောင်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ငါပို။ ပင်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်သောအခါ, ငါဝန်ခံ, ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ထားခဲ့သည်. ဒါကပconflictိပက္ခဖြစ်စေတယ်, ပြီးတော့ပtheိပက္ခကြောင့်ကျွန်မရဲ့ ဦး စားပေးမှုကတောင်ဖြစ်လာတယ်. ရိုးရိုးရုပ်ပိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်၏အံ့ဖွယ်လူသား၏ကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာကိုကျွန်ုပ်မျက်ခြည်မပြတ်ဘဲထားခဲ့သည်, လိင်မှုကိစ္စကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုတဲ့ပweိပက္ခဟာကျွန်မတို့နဲ့အတူရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်, ငါစွန့်လွှတ်သောခံစားချက်များကိုဖြစ်စေခဲ့သည်’ မြင်သာထင်သာအရေးကြီးသောနှင့်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်တစ်ခုခု, ယခုငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးတစ်စုံတစ် ဦး မှတာဝန်ရှိသည်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်ရန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်. သာဘုရားသခငျ့ကျေးဇူးတော်အရှင်ဝေးမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ, ဒါပေမဲ့, ရိုးရိုးသားသား, သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအဓိကအလှည့်ပဲ, ငါနေဆဲငါ့အကြိုက်ဆုံးအပေါ်ဆွဲထားခြင်းနှင့်ငါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီသူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့အလိုရှိ၏, ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်ခြင်းကဲ့သို့ငါဖြစ်၏
မြဝတီ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 5:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နှင့်, သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုလက်ထပ်ချင်တယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းအတွက်ကောင်းတယ်. ငါ့အတွက်မကောင်းဘူး.
ရှီလာ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 5:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Multi- ပြိုင်ပွဲဝင်တစ် ဦး ချင်းအဖြစ်, ငါရည်းစား / ကောင်မလေးရွေးချယ်တဲ့အခါအရေပြားအရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့စရိုက်ကိုကြည့်ဖို့ငါ့ကလေးတွေကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်. ယင်းကြောင့်သူတို့သည်လူမျိုးအားလုံးမှလူများကိုချိန်းတွေ့ကြပြီးယဉ်ကျေးမှုများစွာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြရသည်. ကျွန်တော့်မှတ်ချက်ကအမြဲတမ်းလေးစားစွာဆက်ဆံပြီးချစ်မြတ်နိုးသရွေ့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ, သငျသညျအသားအရောင်အပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူမဖွစျနိုငျသညျငါပြောပြရန်သူကားအဘယ်သူသည်.
ငါဤ blog ၏ငါ့အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဒီမှာဒီကြေညာချက်ကြောင်းပြောဖို့ရှိသည်, “ဇနီးတစ်ယောက်အတွက်ငါလိုအပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇနီးတစ်ယောက်ရဲ့အကြိုက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမထားခဲ့ဘူး။”
အဲရစ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 5:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သတင်းကောင်း! သူမသည်ပင်မဟုတ်ပါဘူး “အဖြူ”! တဖန်သင်တို့ပင်မဟုတ် “အနက်ရောင်” ခရီးစဉ်ကို. သူများသည်အသုံးအနှုန်းများ bunk ဖြစ်ကြသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အာဒမ်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏. ကျွန်တော်တို့ကမတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေဖြစ်ပေမဲ့၊, ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၌ပြန်လည်သင့်မြတ်ကြပြီ! အာမင် bro. ဆောင်းပါးကောင်း. သွေးတစ်မျိုး. သားတစ်ယောက်.
ဂျက်စီကာ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 5:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို! ဒီရေးသားခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအားပေးမှုဖြစ်ကြသည်, ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာကမင်းနဲ့မင်းဇနီးတို့လိုဘုရားရေးရာစုံတွဲတွေရှိတယ်. လည်း, ငါအတူတူကြောင်းသေချာပါတယ်, သငျသညျဆိတ်ကွယ်ရာနိုင်ထက်အများကြီးပိုလူများကလူရောက်ရှိနိုင်ကြသည်. သခင်ယေရှုကိုဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားပါ.
ဖေါ်ပြ: Trip Lee မှအဖြူမိန်းကလေးတစ် ဦး အားအဘယ်ကြောင့်လက်ထပ်ခဲ့သနည်း | 9ကွမ်းခြံကုန်း
Leesa • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 6:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ကိုဖတ်ရှုဖို့အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်! အလွန်အားတက်စရာ. ငါကိုယ်တိုင် disppointing နှင့် rasist မှတ်ချက်များကိုပြုခဲ့ပြီးပြီ. ကျွန်မခင်ပွန်းကအဖြူရောင်ပါ၊. ငါတို့နှစ် ဦး လုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာများမှလာကြသည်. ငါပြိုင်ပွဲပြင်ပမှာလက်ထပ်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်. ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့လူမည်းတစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်မြင်အောင်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းဖို့တောင်ငါအချည်းနှီးဆုတောင်းခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့သူကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုသိတယ်။ လူဖြူတစ်ယောက်တည်းသာမကကမ္ဘာပေါ်ကငါ့ရဲ့ဘုရင်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်! ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပြီးကတည်းကဒီမြေကြီးကိုယ်ခန္ဓာမှာချစ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတကယ်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါပြီ. ငါတို့ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောဖို့မဟုတ်ပေမယ့်ကလေးမွေးဖွားခြင်းပြwithနာတွေနဲ့ငါတို့ရုန်းကန်နေရတယ်။ ကျွန်မယောက်ျားအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။. မင်းရဲ့ဂီတနဲ့မင်းရဲ့ဓမ္မအမှုကိုငါတို့နှစ်သက်တယ်. ဘုရားသခငျသညျသင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုကောင်းကြီးပေး!
ကလောင် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 7:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကြှနျုပျကမကျြနှာဖွူပါ, ငါ့ခင်ပွန်းလည်းနီပြီ. ငါသူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါလူအများစုကသူပြောရန်ထွက်ခွာသည်အထိစောင့်နေကြသည် “သူမျှော်လင့်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး!!” ငါ့ကိုရူးအောင်လုပ်လေ့ရှိတယ်. ကဲ့သို့, ငါလက်ထပ်ခြင်းအမှုသည်သင်၌ရှိ၏. အခုကိုယ့် shrug နှင့်ပြော “သူကငါဖြစ်စေမျှော်လင့်သောအရာကို wasnt, ဒါပေမယ့်ငါသိတယ် 100% ဘုရားသခင်စေခိုင်းတော်မူသောသူဖြစ်၏” သင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုသိရန်၎င်း၏ကောင်းတဲ့. ပြီးတော့မင်းရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကသူမဘာကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်ရတာလဲသိတာပဲ.
တေလာ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 7:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ထို “မာတင်” မှတ်ချက်ငါ့ကိုရယ်မောကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလှိမ့်ထားပါတယ်…ဒါပေမယ့်ငါကျိန်းသေဒီဘလော့ဂ်တစ်ခုလုံးခံစားရတယ်!! လူသည်အပြင်ပန်းကိုကြည့်ပြီးဘုရားသခင်သည်နှလုံးသားကိုကြည့်သည်. ဘုရားသခင်၌အမျိုးသမီးများနှလုံးသားကိုဤမျှဖုံးကွယ်ထားသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်ဇနီးကမကြာခဏကိုးကားခဲ့သည်. ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်သူ့ကိုရှာရန်အလို့ငှာသူ့ကိုရှာရမည်…
ဂျိတ် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 7:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏, ဟေလသလူမရှိ၊, Scinthian မဟုတ်သလို Barbarian. ဤသည်ကိုသန့်ရှင်းသောစာဖြင့်ရေးသားထားသောသမ္မာတရားဖြစ်သည်, သို့သော်, ယုံကြည်သူများစွာရှိသေးသည် “ရက်တွေ” သောစိတ်. အဘယ်ကြောင့်လူမျိုးရေးနေဆဲပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်. ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုံးမဖွဲ့စည်းမချင်းကျွန်ုပ်သည်မွေးဖွားလာခြင်း၌ ဆက်လက်၍ ကြီးထွားလာလိမ့်မည်.
Pamela • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 7:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသောစကားလုံး! မိသားစုပုံများကိုချစ်ပါ. မင်္ဂလာသက်!
Leesa • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 7:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအိမ်ထောင်မပြုသေးပေမယ့်ငါ့ရဲ့ဝမ်းကွဲတွေအများကြီးဟာကမ္ဘာတလွှားကလူနည်းစုအသီးသီးကလူတွေနဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြတာပါ. ဒါဟာအလွန်အေးမြသောကြောင့်မိသားစုများဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအရေခွံအရောင်များကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်. ငါထင်တာကလူမျိုးခြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကသိပ်လှတယ်။. သခင်ဘုရားသည်စိတ်နှလုံးကိုကြည့်ရှုတော်မူသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းလူသားချင်းများဖြစ်သည့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများ၌ရှိသင့်သည်.
IAMDJLADYJ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 7:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်မကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်. ငါလူမျိုးရေးစုံတွဲများ / လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြည့်ဖို့ကိုချစ်! ဒါဟာငါ့အပြိုင်ပွဲအပြင်ဘက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့အနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်အစဉ်အမြဲငါ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သည်. သူကကျွန်တော့်လက်ကိုကောက်ပြီးဒီဇိုင်းဆွဲထားတာကိုသိပြီးကျွန်တော့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့တွေ့တဲ့နေ့ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံလှည့်ပြီးသူ၌ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုလက်ခံသောအခြားနေရာများထက်ထိုအရပ်သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားရမည်ဖြစ်သည်. ဘုရားသခင်ဘာကိုလိုချင်တာလဲ၊. ဤအရာကိုတူးရန်သူသိပြီးဖြစ်သည်. ပိုကောင်းသေးသူသည်ငါတို့အဘို့အကောင်းဆုံးအရာကိုသိတယ်. ဒါကြောင့်ငါတို့တောင်းတာ၊ ဆုတောင်းတာတွေကိုသတိရဖို့လိုတယ်. မင်းလိုချင်တာကမင်းလိုချင်တာအမြဲမဟုတ်ဘူး! သင်၏အသနားခံချက်များကိုလူသိများစေပြီးသူလုပ်သမျှကိုဘုရားသခင်ခွင့်ပြုမည်ကိုဘုရားသခင်ယုံကြည်ပါ!
AmandaB • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 8:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့ကိုဂျက်စီကာလက်ထပ်တကယ်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်. သူမသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနှလုံးရှိသောအံ့ amazing ဖွယ်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်. သငျသညျနှစျယောကျနှစျနှငျ့ယရှေုကိုခစျြသောဇနီးမောင်နှံအရလူတို့အားအံ့သြဖွယ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်. မျက်နှာပေါ်ရှိအရောင်ကိုမဟုတ်ဘဲနှလုံးကိုကြည့်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Paula • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 8:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ကိုယ့်ပြောသမျှအားလုံးကအလွန်ကောင်းပါတယ်, သင်သည်သင်၏ဇနီးနှင့်လက်ထပ်ရသည့်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားဖြင့်မျှဝေခြင်းသည်စကားလုံးများဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ, ဤအရာသည်အခြားရှုထောင့်မှကြည့်ရှုသူများကိုနောင်အနာဂတ်တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ကြိုးစားနေသူများကိုအမှန်တကယ်ကူညီလိမ့်မည်. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုအမှန်တကယ်သိသည်. ထာဝရဘုရားသည်သင်၏အဆွေအမျိုးကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော!
atiya • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 8:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လှသောအဆင်း & အံ့သြစရာ….
ချစ်သူ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 9:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, သတင်းအမှားနှင့်အမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ပြောပြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါကအနက်ရောင်ဖြစ်ပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံ. သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်ကလူမျိုးအားလုံးကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်အားနှေးကွေးစွာဆက်ဆံခဲ့ပြီးအရေးကြီးသည်မှာသူ၏နှလုံးသားသည်ခရစ်တော်၏စိတ်နှလုံးကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်. အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒါ. ထို့အပြင်သင်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုအပြည့်အ ၀ ချစ်မြတ်နိုးသည်. ငါတို့ဟာ biracial စုံတွဲတွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်. ပေါင်းငါ၌များစွာသောရောနှောမိတ်ဆွေများကိုရှိသည် lol အဲဒီမှာတိုင်းပြည်လွှမ်းမိုး. မတ်တပ်ရပ်ပြီးသူတို့ကြားရမည့်အရာများကိုကမ္ဘာကြီးအားပြောပြသည့်အတွက်သင်တို့ကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူသည် :)
SP • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 9:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီ post ကိုဖတ်ရတာပျော်တယ်, ခရီးစဉ်ကို. အိမ်နဲ့နီးတယ်. ငါသည်လည်းလူမျိုးရေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၌ရှိ၏. ကြှနျုပျလူမညျးဖွစျပါတယျ (ဂျမေကာ, အမေရိကန်, အဆိုပါမျိုးရိုးအပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်) ကျွန်မခင်ပွန်းကဟန်ဂေရီလူမျိုးပါ, ဂျာမန်, စသည်တို့ကို - ဒါသူအဖြူပါပဲ. ငါလူမည်းတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသိခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့ခင်ပွန်းလောင်းကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး. မင်းလိုပဲ, ငါချိန်းတွေ့လိုသောမဟုတ်ဘဲကောလိပ်ကျောင်းသို့တက်ခဲ့သော်လည်းခရစ်တော်နောက်လိုက်တစ် ဦး အနေနှင့်ကြီးထွားလာပြီးပညာရေးရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အထူးဖြူငယ်ရွယ်သောယောက်ျားလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးချစ်ခဲ့သည်။.
ငါတို့ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ, လအနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့တစ်နေ့နေ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတာသိပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့လုပ်ခဲ့တာ. ငါကွဲပြားခြားနားသောinရိယာ၌ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ဒါလူမျိုးရေးဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြသောမိသားစုဝင်များရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့အခွင့်ထူးဖြစ်ခဲ့သည်, သူ၏အသားအရောင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းညှစ်ထုတ်ခဲ့သည်. သူဘယ်သူလဲဆိုတာသူ့ကိုငါမြင်ခဲ့တယ်; ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်သောသူဖြစ်၏, စိတ်နှိမ့်ချခြင်း၊. သူလည်းငါ့အရေပြားအရောင်အတိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်, ငါ့နှလုံးသားကိုကြည့်ရင်းငါအတွင်းလူတစ်ယောက်ကိုရှာနေတာ. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအတူတကွခေါ်ဆောင်သွားသည်မှာသေချာသည်. ငါမဆိုပေးထားသောနေ့၌ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့လက်ကောက်တယ်ပိုကောင်းတဲ့ခင်ပွန်းရှိသည်မဟုတ်နိုင်ဘူး. ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်မခင်ပွန်းဖြစ်ချင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မရဲ့အကြိုက်တွေလည်းရှိခဲ့မှာပဲ, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်, ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုထိုက်တန်တာထက်အများကြီးပေးပြီးအများကြီးပေးခဲ့တယ်၊ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တောင်မှလိုချင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူး.
အချို့သောအခြေအနေများတွင်လူမျိုးမရွေးစုံတွဲဖြစ်ခြင်းသည်အဆင်မပြေပုံရသည့်အချိန်များရှိသော်လည်းနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး - ကျွန်ုပ်အားလုံးသည်အရောင်တူညီကြသည်.
ဂျက်ဖရီ • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 9:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
“ဦးစားပေးရှိခြင်းနှင့်အတူသေချာပေါက်မှားဘ​​ာမှမရှိဘူးင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပွင့်လင်းလက်ဖြင့်ကိုင်ထားရန်ရှိသည်။” ဘဝအသက်တာ၌ရှိသမျှသောသွေးကြောများတွင်ဂရိတ်ကိုးကား!
MarcosJackson • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 9:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီပို့စ်တင်ဘို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ငါရိုးသားမှုနှင့်ပွင့်လင်းပျော်မွေ့. သင်တို့နှစ် ဦး လုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
တေးရေး • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 9:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘဝကဏ္ areas အားလုံးတွင်လူ့ဘောင်အထက်ရှိဘုရားသခင့်စကားကိုနားထောင်လို။ သူတို့၏စိတ်နှင့်သူ၏အလိုတော်၊. ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုထည့်ထားသော box နှင့် parameters များကိုပင်တောင်မှမသိဟုမကြာခဏထင်ပါသည်. ကျွန်တော့်မိသားစုကစစ်တပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်အရောင်ကန်းနေတယ်. သို့သော်တောင်ပိုင်းအတွက် ဦး စားပေးမှုများနှင့်ပုံစံများသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်, မကြာခဏ… ကောလိပ်ကျောင်းသားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်မှငါဟာအလှဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြခဲ့တယ်, စမတ်, သူသိခဲ့ဖူးတဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်၊( ဒီမှာပြိုင်ပွဲထည့်ပါ)___ မိန်းကလေး. ကျွန်မရဲ့နှလုံးကိုချိုးပါ. ဟားနဲ့ငါတောင်မှထိုလမ်းအတွက်သူ့ကိုမကြိုက်ဘူး. မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတခြားသူတွေကိုနာခံမှုရှိရှိဖွင့်ပေးလိုက်တာကိုဝမ်းမြောက်မိပါတယ်.
ဂျေဆန် • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 10:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တောလည်ရာ 12:1-11…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်လွတ်ရန်မလိုအပ်ပါ, သခင်ဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောသူကိုပြပါလော့. စင်ကြယ်သောနှလုံး & သခင်ယေရှုအပေါ်တည်ကြည်ခြင်းသည်မည်သည့်စွဲချက်ကိုမဆိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်.
kangstawillz • အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 11:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်းလည်း man.I ပဲလုပ်မယ်။ ငါသခင်နဲ့လက်ထပ်မယ်၊ အသားအရောင်နဲ့ပြိုင်မယ်,e.t.c နေသမျှကာလပတ်လုံးသူမတစ် ဦး ဘုရားရေးရာ one.GOD လူကိုကောင်းကြီးပေးသကဲ့သို့အရေးမပါလိမ့်မယ်.
Lindsey • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 12:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီကိုဖတ်ရှုဖို့ကအရမ်းအားတက်စရာ. ကျွန်မအဖြူရောင်နဲ့ကျွန်မခင်ပွန်းကအနက်ရောင်ပါ, ငါတို့အများစုဟစ်စပန်းနစ်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်ကြသည်. ငါတို့မှာရှိတယ်2လှပသောမိန်းကလေးများသို့သော်မင်းတို့စိတ်ကူးကြည့်။ ရအောင်ကြည့်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မိသားစုများသည်တစ်ခါတစ်ရံအပျက်သဘောဆောင်နိုင်သည်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူအရေးကြီးဆုံးအရာယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်သော်လည်းဖြစ်ပါသည် (ကလေးတွေပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမှကြွလာသောအခါအထူးသဖြင့်အခါ), အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားနှင့်ဆန္ဒများကိုယေရှုနှင့်အတူထားရှိရန်ဖြစ်သည်.
ကံကောင်းပါစေ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 1:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့၏ post ကိုခရီးစဉ်အားဖြင့်ဤမျှလောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတယ်!
ငါသော်လည်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုရှိသည်. ကျွန်တော်ကအာဖရိကန်ပါ(အနက်ရောင်) အမျိုးသမီးနဲ့ငါကလူဖြူတွေကိုလူမည်းတွေထက်ပိုကြိုက်တယ်. ငါနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ရိုးရာအစဉ်အလာတွေနဲ့သိပ်ပြီးအဆင်မပြေလို့ပါ. ငါဆိုသည်ကားရမယ်, ငါအနက်ရောင်ယောက်ျားတွေအများကြီးကိုချစ်ပေမယ့်ငါကဆိုပါတယ်လိုပဲ, ကျွန်တော့်နိုင်ငံမှာရယ်စရာကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိတယ်. သငျသညျငါထိုကဲ့သို့သော ဦး စားပေးအောင်မှားယွင်းနေလို့ပြောနိုင်မလား?
ဂျူလီယာ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 1:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်ဆောင်းပါးခရီးစဉ်. ငါလူမျိုးရေးပြanနာဖြစ်ခြင်းမဟုတ်နှင့်ပတ်သက်။ သင်ပြောသောအရာကိုချစ်ကြတယ်. ငါအဖြူရောင်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလူအများစုကကြည့်ရှုပါ. ငါ biracial အိမ်မှာကြီးပြင်းခဲ့သည်…ငါ့အမေကအီတလီ၊ ဟစ်စပန်းနစ်၊ ငါ့အဖေကအဖြူရောင်ပဲ. ငါလက်ရှိငါ့ကိုကဲ့သို့သူ့ကိုပြိုင်ပွဲဖြစ်ခြင်းမဟုတ်အတူပြissueနာရှိသည်ပါဘူးသူတစ် ဦး အံ့သြဖွယ်အနက်ရောင်လူကိုချိန်းတွေ့နေပါတယ်. သူကကျွန်မကိုလှလှပပမြင်တယ်. အခြားတစ်ဖက်မှလူမည်းအမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်ကိုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြသည်. သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအဖြူရောင်အဖြစ်သာမြင်တယ်…သူတို့သာအမှန်တရားကိုသိလျှင်. သင်အရေးပါသည်မှာမည်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်သည်ကိုအရေးမကြီးသင့်ပါ. ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဒံယလေက • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 6:27 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီလိုအိမ်ထောင်ရေးကိုတားဆီးဖို့ကျမ်းချက်တွေကိုသုံးလေ့ရှိတယ်. “အာဒံနှင့် Eve ၀ တို့သည်အရောင်တူတူသာဖြစ်သည် / ရှံဆုန်ရဲ့အဖေကIsraelသရေလလူစုထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုလက်ထပ်စေချင်တယ် / ဇာက်၏အဖေ '' မိမိလူတို့အကြားကနေဇနီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေကြီးစွာသောအရှည်ထံသို့သွားလေ၏’ Isaac ဇာက်အဘို့, စသည်တို့ကို…”
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာကရက်စက်တယ်, အစက်အပြောက်များနှင့် - အတော်လေးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး - အခြေအမြစ်မရှိ.
ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေပြီးကိုယ်တော့်ကိုမှီခိုဖို့ကလွဲလို့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာထားခဲ့တယ်. ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူကသင်ပေးတယ်. ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားသူများကိုကျွန်ုပ်စတင်တန်ဖိုးထားချိန်၌ပင်. ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံမခွဲခြားဘဲ - ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်ထံချဉ်း ကပ်၍ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တပည့်တော်များကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်, သူတို့ပြသခဲ့သည့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်း.
ထိုအဒီအမေရိကန်အဆင်းလှသောလက်ထပ်ထအဆုံးသတ်ပုံကိုပါပဲ, ဘုရားရေးရာဘရာဇီးမိန်းကလေး. ထို ... ရှိသည် 10 လနှင့်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဤမျှလောက်သင်ပေးတယ်! ဒါဟာထပ်ခါထပ်ခါသက်သေပြလျက်ရှိသည်သောချိုမြိန်ကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်ခဲ့သည်: ဘုရားသခငျ၏နည်းလမ်းများအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းစမ်းသပ်ထားသောအခါ.
Tracy • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကလေးတစ်ယောက်ရောထွေးနေတာကိုး. ငါဟာလူမျိုးတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်မျိုးအပြည့်အဝဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာသိတယ်. ဘယ်ဟာအရေးမကြီးဘူး, တရုတ်, Eskimo, အိန္ဒိယစသည်တို့. ဒါဟာငါမကြားဖူးဘူးဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြစ်ပါတယ်.
ELVISNIXON.com • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကို
ဟနျဂရေီ Magyars ဖြစ်ကြသည်. Magyars များသည် Attila the Hun မှဆင်းသက်လာသောမျိုးဆက်ဖြစ်သည် (ဤအရပ်မှဟူသောဝေါဟာရကို HUNgarian) အဘယ်သူသည်မကြာခဏအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် “မွန်ဂိုတပ်များ” -အက်တလီသည်ဟန်ဂေရီတွင်လူကြိုက်အများဆုံးယောက်ျားလေးများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်- Arpad ဖြစ်သကဲ့သို့- ထို့ကြောင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည်,နည်းပညာပိုင်း, အာရှ.
ထို့ကြောင့်သင်ထင်သည်ထက် ပို၍ ကွဲပြားခြားနားသော / ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံရှိသည်!
မင်္ဂလာပါ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
BrendaF • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်! ကိုယ့်ဒီ post ကိုမြင်လျှင်သည်အထိသူမ၏ပြိုင်ပွဲရိုးရိုးသားသားတောင်မှငါ့ကိုမနှိပ်ကြဘူး. ကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးကျွန်မခင်ပွန်းသည်ဝက်နှင့်အမည်းရောင်ရှိသည် (သူကဟစ်စပန်းနစ်ကြည့်ပေမယ့်) ငါကလူမည်းတွေကိုမကြိုက်ဘူးလို့လူတွေဆီကနေပြက်လုံးတွေရတယ်. အိုးသူတို့ကိုငါ့ရဲ့ကလေးတွေတွေ့ခွင့်မပေးပါနဲ့. BOL! ဒါဟာအမြဲတမ်းနှစ်ဆယူပါတယ်. ငါလက်ထပ်ပြီ7နှစ်ပေါင်းထိုသို့ယနေ့တိုင်နေဆဲရယ်စရာပါပဲ. သင်၏မိသားစုကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
TamaraC • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အာမင်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! သင်၏သက်သေခံချက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ရောက်သည်… လူတွေလိုအပ်တယ်. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!!
Keinya • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤ post ကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်. ငါအချင်းချင်းလည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြတာပါပဲ။ ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မနှစ်ယောက်စလုံးကကျွန်မတို့ကိုသိကျွမ်းပြီးသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်လေးကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ခံစားရနိုင်တဲ့သူတွေအကြောင်းပုံဖော်ထားတယ်၊ ငါတို့အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ofာန်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိစ္စမှာငါ့ရဲ့ကလေးတွေကိုပုံတစ်ပုံမြင်ရပုံအကြောင်းတွေရှိတယ်။ (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအနက်ရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိခင်အထိသူရဲ့ပုံပန်းသဏ္couldာန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဖြတ်သန်းသွားလို့ရမယ်၊) ချက်ချင်းသူတို့ဖွယ်ရှိတဲ့အနက်ရောင်အဖေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းမြင်သည်နှင့်၎င်းတို့၏မျှော်လင့်ခဲ့သည်. လည်း, ငါ့ရဲ့ကလေးတွေဟာအခြားဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်ကြတဲ့အတွက်ငါတို့နာမည်ကလောရင့်စ်ကြောင့်လူတွေကိုတကယ်ရှုပ်ထွေးစေတယ်. သူလည်းရောနှောပြိုင်ပွဲကြောင့်ကြောင့်နောက်ကွယ်မှပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် (အနက်ရောင်မဟုတ်ဘူး). ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါသည်သင်တို့ကိုဤအရာမှထိမိသောအချက်ကိုချစ်သောကြောင့်အချို့သောအဘို့, ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးတွင်လူမျိုးရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဖိအားများရှိနေသကဲ့သို့ပင်ကြီးမားသောသဘောတူညီမှုတစ်ခုပင်ရုန်းကန်နေရသည် (မီဒီယာ, ငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများပင်, မိတ်ဆွေများ, စသည်တို့ကို). ငါ့ခံစားချက်များသည်သင်နှင့်မှတ်ချက်ပေးသောအခြားသူများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Keinya • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
စကားမစပ်, ငါသီချင်းကိုကြိုက်တယ် “ကောင်းတဲ့အရာ” သင်၏မယားအကြောင်းကိုပြောကြလော့. ဒါဟာတကယ့်ကိုလှပပြီးငါ့ကိုကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးကိုစဉ်းစားစေသည်. အရမ်းကြီးသောဂီတများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! :)
Logan • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 9:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါချစ်တယ် “Robot”!!! ငါပွဲတော်အဘို့ကခုန်လိမ့်မည်.
မိုက်ကယ် • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 9:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
“ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါ wifed ။” ငါခိုးတာပါ.
နေပြည်တော် • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 9:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အိုလာ!!!!! ကျွန်ုပ်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးပါ, တောင်မှငါမာတင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဇာတ်လမ်းတွဲမြင်ကြပြီ
ဒက်ဘီ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 10:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဖတ်တာအရမ်းပျော်တယ်။ တခြားသူတွေကငါနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားတာကိုအတူတူပဲခံစားရတယ် “လူမျိုး”, ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
ဂျေဆန် • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 10:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
1 ရှမွေလသည် 16:7…စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူ၏, ဒါဆိုငါတို့ဘာကြောင့်လဲ? သခင်ဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းငါပြုရမည်, ငါတို့ဇာတိပကတိအလိုသို့ လိုက်၍၊. ဒီကိစ္စမှာ, လူရဲ့ရှုထောင့်ကနေ, ဇနီးအတွက်စံသည်သုတ္တံကျမ်းဖြစ်သည် 31, သင့်ကိုယ်ပိုင်အတွင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၏လောကစံနှုန်းမဟုတ်အရေပြားသေံမဟုတ် “လူမျိုး၊”
မြဝတီ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 11:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တိုနီ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 11:31 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါကအာဖရိကန်အမေရိကန်ပါ၊ ကျွန်တော့်ဇနီးကဟစ်စပန်းနစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤအချက်ကိုသဘောပေါက်ပါသည်. သူမရဲ့ပြိုင်ပွဲကကျွန်တော့်အတွက်ဘယ်တော့မှအချက်တစ်ချက်မှမရှိခဲ့ဘူး, သူသည်ထာဝရဘုရားကိုချစ်သောကြောင့်၊. ငါတို့မှာသမီးကလေးတစ်ယောက်ရပြီ. ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်သမီးကိုကြည့်သောအခါဟစ်စပန်းနစ်စ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ, ဒါမှမဟုတ်ရောစပ်ထားတဲ့ကလေး. ငါ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးကောင်းချီးနှစ်ခုကိုပဲငါတွေ့တယ် (သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ကင်းကွာသည်). တခါတရံမှာကျွန်မတို့ဟာလူမျိုးရေးစုံတွဲ၊. အခြားလူများကြောင့်၎င်းသည်တစ်ချိန်လုံးမလွယ်ကူပါ, ဒါပေမယ့်ငါကအခြားမည်သည့်လမ်းရှိသည်မဟုတ်ပေ. ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်အား၊!
အင်ဒရူး • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 1:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ငါအဖြူရယ်, နှင့်စင်စင်နာတီနှင့်ငါကြီးပြင်းရာအရပ်မှငါများသောအားဖြင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်တစ်ခုတည်းသောဖြူဆိ. ကျွန်တော့်ဇနီးမှာလုံးဝမတူကွဲပြားသောကြီးပြင်းမှု. သူသည် Nebraska ကျေးလက်တွင်မက္ကဆီကန်အဖြစ်ကြီးပြင်းခဲ့သည်. သူမနှင့်သူမအစ်ကိုများအနေဖြင့်အမုန်းတရားကြောင့်ကြီးပြင်းခဲ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြမည့်ဇာတ်လမ်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်ပင်ရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပါ, .ရာဝတီ, သူမကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်လူများ၏အဝိဇ္ဇာကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်.
သူမကကျွန်မနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေဖို့ Nati ကိုပြောင်းသွားတယ်. သူမသည်သူမနှင့်အတူသည်းခံရန်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းစဉ်းစားအဲဒီမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, ကြားပါ, သို့မဟုတ်သူမကြီးပြင်းရာမှတဆင့်သွားသောအရာတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစား. ဝိုး, ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်! လူတွေကကုန်တိုက်ထဲမှာငါတို့ပြောလိမ့်မယ်, ပန်းခြံမှာ, သို့မဟုတ်ရုံစားရန်ထွက်. ခင်ဗျားတို့ကပြပွဲမှာရောက်နေမယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်, “သင်ဘာလုပ်မလဲ။” ဒါဟာတစ် ဦး ရုန်းကန်ဖြစ်ခဲ့သည်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ငါတို့ကိုခိုင်ခံ့စေ၏, ငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကငါတို့နောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်, ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏.
ငါတို့အခုလက်ထပ်လိုက်ပြီ 11 နှစ်ပေါင်း4ဒါကိုပြသရန်လှပသောကလေးများ. သူမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မြို့ငယ်လေးမှာငါတို့လည်းနေတယ်. အမုန်းတရားလျော့နည်းသည်, ဒါပေမယ့်ရူပရှိနေဆဲဖြစ်သည်. ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောလေ့ရှိသည် “တိုက်ခိုက်မှုများ” ငါတို့မူကား၊ “တိုက်ခိုက်ခြင်း” ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်. သမ္မာကျမ်းစာကသင်၏ရန်သူကိုကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ခြင်းအကြောင်းဖော်ပြထားသည်, ငါကဒီလူတွေကိုငါ့ရဲ့ရန်သူလို့မထင်ဘူး, ကျမ်းစာ၌ပါသောအယူအဆမူကား၊.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်, လူတိုင်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာပြဖို့လိုတယ်. လူတစ် ဦး ၏လူမျိုးသို့မဟုတ်နောက်ခံမည်သို့ပင်ရှိပါစေ, သူတို့ကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်, ငါတို့မူကားခရစ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ဒါကြောင့်ငါတို့လည်းသူတို့ကိုချစ်သင့်တယ်.
ငါတို့ကိုဂုဏ်တင်တယ် • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 1:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အံ့ဖွယ်ဆောင်းပါးခရီးစဉ်. ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေနေဆဲဖြစ်သော်လည်းငယ်ငယ်ကတည်းကကျွန်ုပ်၏ ဦး လေးနှစ်ယောက်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးများနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သောကြောင့်အဖြူရောင်မိန်းမနှင့်လက်ထပ်ရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။. ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူအကြားခြားနားချက်ကိုမတွေ့ရပါ.
Andrew Almond • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 2:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အံ့ဖွယ်ရာခရီးစဉ်. ငါနဲ့ချိန်းတွေ့သင့်တဲ့သူလိုချိန်းတွေ့တဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်မကြာသေးမီကကျွန်တော်တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်, ဘယ်တော့လဲ, ဘာကြောင့်လဲ, အရာအားလုံးအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားမည်သို့စောင့်ဆိုင်းရမည်နည်း, နှင့်ဤ post ကိုအလွန်အမြင်ဖြစ်ခဲ့သည်. မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Jenna • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 2:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အံ့သြစရာ post ကို! ခရီးစဉ်ကို, မင်းမှာလှပတဲ့မိသားစုရှိတယ်, ပြီးတော့မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မနှစ် ဦး စလုံးအဖြူဖြစ်ကြသည်ပေမယ့်, ကျနော်တို့အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြီးပြင်းလာတယ်. သူဟာစစ်မှန်တဲ့တိုင်းပြည်ကကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ. လူမည်းတွေရဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာငါအမြဲသက်သောင့်သက်သာရှိတယ်, ပင်သေးငယ်တဲ့ကလေးကအဖြစ်. လူဖြူတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်တာကိုကျွန်တော်လုံးဝဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော့်အကြိုက်တွေကဟစ်ဟော့ပ်ယဉ်ကျေးမှုမှာလူတွေကို ဦး တည်ချက်ထားတာပါ. လူတွေဟာငါတို့ဘယ်လိုအတူတူရပ်တည်ခဲ့ကြသလဲလို့မကြာခဏမေးတတ်တယ်, လူအများစုကကျွန်မခင်ပွန်းကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရလို့တုန်လှုပ်သွားတယ်. သူကငါကြီးပြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဘို့မျှော်မှန်းခဲ့ရာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကကျွန်မရဲ့ကလေးအတွက်ကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်ဖခင်အတွက်လိုအပ်သမျှပဲ. ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီ, ပြီးတော့ငါ့ဘဝကိုတခြားနည်းနဲ့ငါမမြင်နိုင်ဘူး!
ဖေါ်ပြ: အဆိုပါစာရင်း | ဆက်ဆံရေးအရင်းအမြစ် Kit
RG • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 3:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်၏နှလုံးသားသို့မဟုတ် ဦး စားပေးမှုမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်စီစဉ်ထားသောအရာများမဟုတ်ပါ. ဒါဟာဘုရားသခငျ၏ Providence ထင်ရှားဘယ်လိုအံ့သြဖွယ်ပါပဲ. ကျွန်ုပ်သည်ကြိုတင်မှာကြားထားမှုတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းသည်မက္ကဆီကန်ဖြစ်သည်. ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာမတူကွဲပြားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကြီးပြင်းခဲ့ကြပေမဲ့အချုပ်အခြာအာဏာရှင်ယေဟောဝါကိုယုံကြည်တယ်၊ သူကသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုစေချင်တယ်၊. ကျနော်တို့အခုကြိုတင်မှာကြားထားတာအနီးမှာနေတယ်. ငါဆုတောင်းတယ် (၏အသက်အရွယ်မှာအသစ်တခုခရစ်ယာန်အဖြစ် 8) ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်၏မူလဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးချမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်အားဤဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိသင်းအုပ်ဆရာ၏ဇနီးအဖြစ်ကြီးထွားစေမည်ဟုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါ။! သေး, ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဤတူညီသောအစွမ်းထက်သောဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်အားသူ၏ကြီးမားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကျေးဇူးတော်ကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်ကိုသိရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၀ မ်းမြောက်ပါသည်. ကျွန်ုပ်၏အမျိုးသားများကို the ၀ ံဂေလိတရားဝေငှရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းသည်လက်တွဲကူညီရန်.
ဒါကကျွန်မအတွက်တကယ်အားပေးမှုပဲ. ဘုရားသခင်သည်သူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရန်နှလုံးသားကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုကြားရသော်အလွန်ကောင်းပါသည်! သူ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ!
သင်ထည့်သွင်းထားသောသီချင်းများနှင့်အမှန်တရားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါတို့မိသားစုကမင်းရဲ့ဂီတကိုနှစ်သက်တယ်. အထူးသဖြင့်ကျွန်မရဲ့ဆယ်ကျော်သက်သားတွေ.
တဝက် • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 3:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မယောက်ျားကမက်ဆီကန်ပါ, ငါဖိလစ်ပိုင်ပေါ့. ငါသိတယ်3ဘာသာစကားများနှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူ. ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကအနက်ရောင်ပါ၊ သူမခင်ပွန်းကအာရပ်လူမျိုးပါ. ချာ့ချ်များနှင့်အုပ်စုများတွင်ပင်လူမျိုးပေါင်းစုံကိုတွေ့မြင်ရခြင်းသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်.
ငါတို့တကယ်တ ဦး တည်းရဲ့ဇာတ်ကောင်များ၏ content ကိုကြည့်ကြဘူး. ဘာသာစကားများသင်ယူခြင်းနှင့်လှပသောယဉ်ကျေးမှုများအားလုံးကိုလေ့လာခြင်းသည်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သည်. ခရစ်တော်၌ယုဒလူမရှိ, ဂရိ, အထီးမဟုတ်မိန်းမ.
Matt • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 4:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အကြှနျုပျ၏ပိုပြီးရှက်စရာတစ်ခုမှာ “ဦးစားပေး” နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ဒင်းဗား Broncos ပန်ကာဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်.
မာရီယာ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 4:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအဖြူရယ်, ငါကိုယ်ဝန်ရခဲ့တယ်, အနက်ရောင် Mans ကလေးနှင့်အတူဆေးကျောင်းပထမနှစ်. ကိုယ်ဝန်သုံးလမှာ, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုမိတျဆှေကိုစလှေတျခဲ့ – အညိုရောင်အိန္ဒိယလူ. ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဆေးကုသမှုခံယူတာကိုပဲစခဲ့တယ်. ငါလုပ်ဖို့အကြောင်းကိုအလုံအလောက်အရူးဖြစ်ခဲ့သည်. သူကသူ့အကြောင်းမိဘတွေကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့ကထောက်ပံ့မှုအားလုံးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်တယ်, သူ့အစ်ကိုတွေကကျွန်တော့်ကိုစကားမပြောဘူး. တစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးတဲ့နောက်ငါတို့လက်ထပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကျောင်းတက်နေတုန်းပဲ, ငါတို့သားကိုပြုစုပျိုးထောင်ပြီးလူတွေရှုပ်ထွေးနေတုန်းပဲ. ဘုရားသခင်ကကောင်းတယ်, ငါ့ဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးအချိန်တစ်ခုမှာ, သူကကျွန်မကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေးခဲ့တယ်, သန့်ရှင်းသောသူ၊, ငါ့ကိုချစ်ဖို့, ငါအားလုံး, ငါ့ကို + ကလေး. အစစ်အမှန်လူကို Heres. အလွန်ချစ်မြတ်နိုး။ ကျေးဇူးပြုတတ်သောဖခင်၏စကားကိုကြားလိုက်ရသည်.
Aleshia ရော်ဘင်ဆင် • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 4:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
၎င်းသည်ဟန်ဆောင်မှုဖြစ်သော်လည်းလူအများကြားတွင်လူမျိုးပေါင်းစုံစုံတွဲကိုတွေ့သည့်အခါလူမည်းလူမည်းနှင့်မတူသောလူမည်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါ၎င်းမှမည်သည့်အရာမျှမစဉ်းစားပါ။. ယင်း၏အပြန်အလှန်လျှင်ငါတောင်မှတုန်လှုပ်ချောက်ချားပါဘူးဒါပေမယ့်ငါကဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူမည်းဖြစ်ခြင်းအများဆုံးထက်ခက်ခဲသည်ကိုငါသိ၏. ငါဟာလူမည်းတွေနဲ့အတူဟိုတယ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ guests ည့်သည်တွေကငါ့ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်၊ ငါဟာငါ့အလုပ်ကိုထူးချွန်စွာလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်, သူတို့ကကျွန်တော့်အနက်ရောင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော့်ရှေ့ကဖြတ်လိုက်တယ်. ငါသူတို့ရဲ့အခန်းကိုမျက်နှာသုတ်ပဝါတွေပို့ပေးနိုင်ပေမဲ့ the ည့်သည်တွေကသူတို့အတွက်တံခါးမဖွင့်ဘူး. ငါ guests ည့်သည်များနှင့်လွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကမေးတယ် “ငါမသိဘူး. မင်းဒါကိုလုပ်နိုင်လား?” ငါအပြင်မှာအနှောင့်အယှက်မရှိအနားယူနိုင်ပေမယ့်ရဲကသူတို့ကိုမေးခိုင်းတယ် “ယောက်ျားတွေဘာလုပ်နေလဲ?” ပြည်သူ့ကွဲပြားခြားနားအနက်ရောင်ယောက်ျားစစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းနှင့်ငါအဘယ်ကြောင့်ထွက်နေသေးတယ်ကြပြီမဟုတ်. ဒါကြောင့်ငါကအခြားမည်သူမဆိုနှင့်အတူလူမည်းကြည့်ရှုသောအခါ, ငါ့ပထမအတွေးက “သူသည်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကြိုးစားနေသည်။” ကျွန်မရဲ့ဒုတိယအတွေးက “သူကသူ့ကလေးတွေကိုသူမအင်္ဂါရပ်တွေရှိစေချင်တယ်။” ဒါပေမယ့်ဟေး, ငါစီရင်သောသူကားအဘယ်သူနည်း? (ငါလုပ်ပေးပေမဲ့) ငါဟာအစကန ဦး လိုပဲငါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲပြင်ပမှာလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖွယ်ရှိသည်, ဒီအမှတ်ကဖြောင့်ဟန်ဆောင်မှုပဲ. အနည်းဆုံးသင်မှန်ကန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်၏ဥစ္စာလက်ထပ်ခဲ့သည်.
လင်း Burgess • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 7:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ် & ဂျက်စီကာလီ. ယေရှုခရစ်၏စစ်မှန်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်း“ လူမျိုးစု” လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှု၌လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုအဖြေပေးသည်. ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲရှိတယ်, လူသားမျိုးနွယ်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ (ကမ်ဘာ​​ဥ​​ီး 5:2တစ်ဦး), သင်၏အသားအရေနှင့်မျက်လုံးပုံသဏ္ဌာန်တူသူများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်မည်သည့်နေရာ၌မျှဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ.
သီရိ • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 8:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူတစ်ပါးအပေါ်ထားရှိသောသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထင်ဟပ်စေသောနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုရှင်သန်ရန်ရှာကြံသောတစ်ကိုယ်ရေအနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်, ငါဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်းအထန်ဆုတောင်းပြီးပြီ. ငါတက်ရောက်ခဲ့သည့်ချာ့ချ်များတွင်တစ်ကိုယ်ရေသမားအများစုသည်လူမည်းမဟုတ်သူများဖြစ်သည်. တစ်ခါတလေငါ Totem တိုင်၏အောက်ခြေမှာဖြစ်ကြောင်းကိုသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်, အဖြူဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်, ရှည်လျားသောနှင့်အတူအာရှနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်အမျိုးသမီးများ, ငါဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုဆံပင်နှင့်အင်္ဂါရပ်များစီးဆင်း. တောင်မှခရစ်ယာန်ချိန်းတွေ့က်ဘ်ဆိုက်များအချို့မှတဆင့်ရှာဖွေနေ၌တည်၏, ခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရှိတဲ့အမျိုးသားအများစုဟာအာဖရိကန် - အမေရိကန် မှလွဲ၍ လူမျိုးစုအားလုံးနီးပါးကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသခဲ့တာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်.
မင်းရဲ့ဆောင်းပါးကကျွန်မကိုအားရှိစေပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်. ကျွန်ုပ်၏ဘဝကဏ္ areas အားလုံးတွင်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်, ငါ၏အဆက်ဆံရေးအပါအဝငျ. ကြေးဇူးတငျစကား!
အဖွား • နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 10:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အတော်များများ, လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်၏သားအကြီးဖြစ်သည့်အချိန်ကဖြစ်သည် 2, ကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့အနက်ရောင်အပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးကားမောင်းနေတုန်းလူအားလုံးကအနက်ရောင်ဖြစ်နေပြီးလူတိုင်းဘာကြောင့်လူမည်းတွေဖြစ်တာလဲလို့သူမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်. လူဖြူတွေအားလုံးကareaရိယာတစ်ခုမှာနေပြီးလူမည်းတွေအားလုံးကoneရိယာတစ်ခုမှာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာကြာပြီ။. သင်၏အသားအရေသည်မည်သည့်အရောင်နှင့်မျှမတူပါ. သူငယ်၏နှုတ်ထဲကထွက်သည်……ဟုသူကပြောသည်, “yeah, အရေးကြီးတဲ့အရာကငါတို့အရေပြားတယ်ဆိုတာပဲ!”
Jays_Page • နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 တွင် 12:56 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ရိုးသားပါ • နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 တွင် 3:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောမိန်းမနှင့်လက်ထပ်ခြင်းသည်ပျော်ရွှင်သောမိသားစုတစ်ခုအတွက်သင်လုပ်နိုင်သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ကောင်းမွန်စွာပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသင်အမျိုးသမီးများသင်သွားလိုသည့်ခရီးသည်သူမဖြစ်သင့်သည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်.
ဖေါ်ပြ: စနေနေ့ကြွေးကြော်ကြလော့-တနေရာ: SBTS, ဒါဟာဖြောင့်ဖြတ်, & ဝန်ကြီးဌာနအ Links များ | H.B. ချားလ်စ် Jr.
Kaila • နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 တွင် 4:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့ကိုဤရာထူးနှင့်အတူဤမျှလောက်ပွင့်လင်းရိုးသားခဲ့ချစ်ကြတယ်. ငါလူမျိုးရေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ချိန်းတွေ့၏လုပ်ရပ်ကလူဆွေးနွေးရန်ပိုမိုပွင့်လင်းလိုအပ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်တူသောငါခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမျိုးဆက်တိုင်းအတွက်လူတွေကအတူပြissueနာရှိသည်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်. ကျနော့်အမြင်အရချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုသည်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းသည်အလွန်လှသည်ဟုထင်သည်.
ဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ငါဟာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်အသိုင်းအဝိုင်းကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှမကြိုက်ဖို့ငါ့ကိုမိဘတွေဘယ်တုန်းကမှမမွေးဖွားခဲ့တဲ့ရပ်ကွက်မှာအမြဲတမ်းကြီးပြင်းလာခဲ့လို့ပါ။. ဒါပေမဲ့, ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုယူသောအခါကျွန်ုပ်၏ငယ်စဉ်နှစ်အနည်းငယ်တွင်ကြုံခဲ့ရသည်, အဖြူရောင်ဘယ်သူလဲ, ငါ့အဖေဘက်ကအဖွားအဖြူကလူကိုမနှစ်သက်သောကြောင့်, Prom မှ. သို့သော်, သူမ၏တုံ့ပြန်မှုကိုငါသို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့သင့်တယ်ဘယ်သူကိုအကြောင်းကိုငါ့စိတ်ကိုမပြောင်းခဲ့ပါဘူး.
ငါရက်စွဲအဘယ်အရာကိုပြိုင်ပွဲအပေါ်တစ် ဦး ဦး စားပေးခဲ့ဘူး. ဒါပေမဲ့, ကျွန်တော့်မိသားစုကသိသွားတဲ့အခါငါမှာရည်းစားရှိပြီးသူကလူမည်းပဲ, သူတို့ကအံ့သြသွားတယ်. ကျွန်ုပ်၏မိသားစုသည်အတိတ်ကာလကအဖြူရောင်နယ်မြေတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့အံ့သြခဲ့ကြသည် 10 နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကငါ့ဆက်ဆံရေးကိုယိမ်းယိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့တယ်.
ဒယ်နီ • နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 တွင် 4:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကအလွန်အားတက်စရာ post တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်. ကျွန်တော့်ဇနီးကအယ်လ်ဆာဗေးဒိုးပဲ. .. ငါကကိုရီးယားလူမျိုးပါ…. ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတွင်အနက်ရောင် / လက်တင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး တည်းနှင့်တောင်ကိုရီးယားလူမျိုး၏အပြင်ဘက်တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည်လုံးဝကြားဖူးသည်. ထူးဆန်းသောလူမျိုးရေးစုံတွဲအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်းရဲခက်ခဲမှုများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, သို့သော်အရေးပါသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာခရစ်တော်နှင့်ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏နှောင်ကြိုးသည်ချစ်ခင်ရင်းနှီးခြင်းနှင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်တွင်သာဖြစ်သည်.
ကီဗင် • နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 တွင် 8:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီဟာကအံ့သြစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်. မင်းတို့ဘယ်လောက်ပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ဆိုတာမင်းကိုသဘောကျတယ်၊ ငါတို့အများစုကအကြိုက်လိုချင်တဲ့အရာမျိုးကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်, ဒါပေမယ့်မင်းတို့ကသူတို့ကိုမင်းတို့ဘယ်လိုတင်သွင်းရမယ်ဆိုတာငါသဘောကျတယ်. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်ကိုဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုဆက်ပြသဖို့ဆုတောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသွင်အပြင်ကိုသာမကဘဲဘုရားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်မြွက်စကားတော်ကိုနှလုံးသားနဲ့အာရုံစိုက်နိုင်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတကယ်ယုံကြည်လို့ပါပဲ။.
ဂျိုအဲ • နိုဝင်ဘာလ 4, 2013 တွင် 9:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော့်ဇနီးက Yankee ကိုလက်ထပ်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး, ဟစ်စပန်းနစ်, ဂျူးခရစ်ယာန်. သူမလုပ်တာဝမ်းသာပါတယ်. :)
MJ • နိုဝင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 1:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကြယ်! မင်းရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေတဲ့အတွက်မင်း. ငယ်သောအရွယ်, ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်လူငယ်များသည်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာများကိုအလွန်လိုအပ်သည်! ငါလိင်အကြောင်းပြောနေတာပေါက်ကွဲမှုရှိခြင်းကြောင့်ငါသိ၏, ကတည်းကချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေး 2003. ကျိန်းသေမှာသူတို့နှင့်အတူမျှဝေပါလိမ့်မည် https://www.facebook.com/FMUniversity.
zacharybrunotte • နိုဝင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 6:19 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအနက်ရောင်ဇနီးနှင့်အတူလူဖြူလူပေါ့. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမနှစ်တွင်ရှိနေသေးသည်, ဒါပေမယ့်နောင်တမရပါဘူး! ငါတို့လက်သီးကလေးတစ်ယောက်ကိုလမ်းပေါ်မှာထားပြီးငါတို့မိသားစုလေးကိုချစ်တယ်. Trip Lee လိုပဲ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ် (ငါက၎င်း၏ရုံသဘာဝကထင်ပါတယ်). သို့သော်လည်းငါသည်တစ်ခါမျှဤမေးခွန်းကိုသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ဘူး “မှန်သော” သို့မဟုတ် “မှားတယ်” သူသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်၏. ငါကြည့်ရှုသောတစ်ခုတည်းသောပြိုင်ပွဲပါပဲ!!
နှိမ့်ချမှု • နိုဝင်ဘာလ 7, 2013 တွင် 2:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အာမင် fam, မတူကွဲပြားမှုများသည်ကျေးဇူးတရားနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်တင်ပါသည်.
ဟုတ်ပြီ • နိုဝင်ဘာလ 7, 2013 တွင် 8:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျသူမ၏ wifed? ဟုတ်ပြီ, သငျသညျလက်ထပ်ဆိုပါတယ်နိုင်ဘူး?
Jenn • နိုဝင်ဘာလ 7, 2013 တွင် 9:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်နဲ့ဂျက်စီကာပထမဆုံးစချိန်းတွေ့တာကိုမှတ်မိသေးတယ်! ငါသည်သင်တို့နှစ် ဦး ကိုဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၌အပေါ်ဆက်လက်ကြည့်ဖို့အားပေးမှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်. ဒါကကြီးကျယ်တဲ့ဘလော့ဂ်တစ်ခုပါ။ လူများစွာအတွက်အပြင်ပန်းထက်လူတစ် ဦး ၏စိတ်နှလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်သောကြောင့်၎င်းသည်လူအများလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။.
ဖေါ်ပြ: အထူးဖတ်ရှုခြင်း: 11/01/2013 – 11/12/2013 |
ယောလ • နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 4:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
“ကယ်တင်ရှင်ဆီသို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုတွေ့ရင်ကြိုးစား။ ပြေးပါ, သင်၏မျက်လုံးထောင့်တစ်နေရာတည်းတွင်အတူတူပြေးနေသည်, ဒုတိယအကြိမ်ကြည့်သင့်တယ်”
ရာချယ် • နိုဝင်ဘာလ 27, 2013 တွင် 4:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လုံးဝဒီကိုချစ်! ငါသည်ငါ့မိဘများနှင့်အတူဤမျှဝေတာပါ. ကျွန်တော့်မိဘများသည်ကျွန်ုပ်သည်မတူညီသောပြိုင်ပွဲဝင်ယောက်ျားလေးများကိုကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်. ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ယောက်ျားတွေကိုငါအမြဲတမ်းစိတ်မ ၀ င်စားဘူး, ငါအတော်လေးဘုရားရေးရာလူကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်ကြိမ်ရှိခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူကအဖြူရောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကသူတို့နဲ့လုံးဝဆက်နွယ်မှုကိုလုံးဝငြင်းပယ်ခဲ့တယ်. ငါကျိန်းသေသူတို့နှင့်အတူဤမျှဝေနေပါတယ်, မျှော်လင့်ဒီသူတို့မျက်စိဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်.
Tasi • နိုဝင်ဘာလ 30, 2013 တွင် 11:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အစ်ကို, လူမျိုးရေးဆက်နွယ်မှုကဲ့သို့သောစကားလုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ vocab မှထုတ်ပစ်သင့်သည်. လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်.
မောရစ် • ဒီဇင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 2:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး. ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ့အကြီးထွားလာ၌တည်၏, ငါတို့ယဉ်ကျေးမှု၌သူတို့သင်ကြားပေးသောအယူအဆတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးအဖြူရောင်မိန်းကလေးများကသင့်ကိုသာချစ်ပြီးသင့်မိသားစုကိုမုန်းသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်. သူတို့ကပိတ်ထားခံရဖို့ကိုချစ်. ဒါကြောင့်ငါ့အဘိုးအဘွားအမြဲပြောခဲ့တယ် “မင်းတို့ကိုမင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုမလာစေချင်ဘူး၊, အဖြူရောင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပါ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကငါတို့ကိုသင်နှင့်နီးရန်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။”
အာဘီ • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2013 တွင် 2:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာဘီ • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2013 တွင် 2:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ: Casserole ဘလော့ဂ် – 12/13/2013 :: ကယ်ရီအစိမ်းရောင် - podcast ထုတ်လုပ်သူ, စာရေးသူ, စပီကာ, စီးပွားရေးသမား, လက်ထပ်ထိမ်းမြား & မိသားစုနည်းပြ, ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်.
လွိုင် • ဒီဇင်ဘာလ 17, 2013 တွင် 9:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာရယ်စရာပါ. ငါအဖြူရယ် (ဟစ်စပန်းနစ်အပိုင်း, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုဘယ်သူမှကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး), ငါ့ခင်ပွန်းလည်းဖြူ၏, ဒါပေမယ့်သူကတိုင်းပြည်ကနေဖွင့်ငါမြို့ကနေပေါ့. သူကတောင်ဘက်ကနေ, ငါမြောက်ဘက်ကနေမိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေတန်ချိန်များတူညီကြသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အတူတူပင်မဟုတ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းခရီးအမျိုးမျိုး၌စကားပြောဆို၊, နှင့်ငါတို့မိသားစုများကိုတကယ်ကွဲပြားခြားနားပါသည်, ဒါပေမယ့်ငါတို့အချင်းချင်းချစ်ကြတယ်, ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချီဆောင်တော်မူ။ ၊. ယဉ်ကျေးမှု, သော်လည်း, ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ညှိတယ်. ထို, သခင်ဘုရား၏အစေကိုခံစေခြင်းငှါ၊, လက်ထပ်ထိမ်းမြားအားလုံးအကြောင်းပါသောအရာကိုဖြစ်ပါတယ်! ဝမ်းသာပါတယ်!
Teboho Prince • ဇန္နဝါရီလ 13, 2014 တွင် 5:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခဲ့သည်,ဒါကြောင့်အရောင်သင်တစ် ဦး thing.Love မပြောနိုင်ဘူး
Corina • ဇန္နဝါရီလ 19, 2014 တွင် 11:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကအလှဆုံးဇာတ်လမ်းပဲ………အထူးသဖြင့်သင့်ဇနီး…သင်တို့၊. …ur ပုံပြင်မှအာမင်! !!!
Donald • ဇန္နဝါရီလ 25, 2014 တွင် 7:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မန် • ဇန္နဝါရီလ 26, 2014 တွင် 9:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို! ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိက, မင်းရဲ့ဂီတကလှတယ်၊. သီချင်းတစ်ပုဒ်ချင်းစီမှာသင်ဟောပြောတဲ့သတင်းကိုငါနှစ်သက်တယ်. ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအံ့ talent ဖွယ်အခွက်တဆယ်ကိုဆက်ယူပါ! လူမျိုးရေးဆက်ဆံရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ကြသည်. ဒါဟာတ ဦး တည်းသောအရာကိုပြိုင်ပွဲအရေးမသငျ့သညျ, ဒါပေမယ့်သင်ကလိုပဲ, ဘုရားရေးရာအိမ်ထောင်ဖက်. ကျွန်ုပ်ကော့ကေးဆပ်လူမျိုးပါ, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသားတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်. ကျွန်တော့်မိသားစုကအရမ်းပါပဲ, အရမ်း, အလွန်ဒီလက်ခံ. :) သို့သော်, ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုမှန်ကန်တဲ့သူဆီပို့ပေးဖို့ဆုတောင်းတယ်, သူကလူကြီးလူကောင်းနှင့်ဘုရားကဲ့သို့သောအရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်. ငါ့ကိုချစ်တာထက်ခရစ်တော်ကိုပိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါတောင့်တခဲ့တယ်, လေးစားမှု, နှင့်ချိုမြိန်. ဒါကငါ့ရဲ့မျက်လုံးဖွင့်ပေးလိုက်ပေမယ့်လူမည်းတွေအစားလူမျိုးအားလုံးအတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ. သင်နှင့်ဂျက်စီကာကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
Terrice • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 11:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤအရာသည်အလွန်ဆောင်းပါးခဲ့သည်… မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရတာတကယ်ပျော်တယ်. မင်းရဲ့ပုံပြင်တွေကိုမျှဝေပေးပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းများဖြင့်အသုံးပြုသည်! ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
နှငျးလြှော • ဇန္နဝါရီလ 29, 2014 တွင် 9:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး, ဒီဆောင်းပါးကကြောက်စရာကောင်းတယ်! ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလော့! ခရီးစဉ်ကို, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာတကယ်ကောင်းတဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ကြသည်. မင်းရဲ့ post ကိုဖတ်နေတုန်းအချစ်ဇာတ်လမ်းဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုဖတ်နေသလိုခံစားရတယ်. ပြုံးတွေအများကြီးနှင့် “awwwwww!” ဤမျှလောက်များစွာသောမျက်နှာစာအပေါ်ဘုရားသခင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
LeisleyAbrahams • ဇန္နဝါရီလ 30, 2014 တွင် 2:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း Trip ကကျွန်ုပ်ကိုအမြဲတမ်းရှင်းပြခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်!!ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လာမည့်ခြေလှမ်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ထာဝရဘုရားကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင်ပြည့်ပြည့် ၀၀ အနက်ရောင်အာဖရိကန်နှင့်သူမသည်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမကိုအဘယ်ကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏အသားအရေကိုမိန်းကလေးများအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့်မမေးဘဲအမြဲကြည့်နေတတ်သည် ထိုမိန်းမ၌ယေရှုကိုစွန့်ပစ်သောဘုရားတရားကြည်ညိုသောမိန်းမဖြစ်ပါ၏, သခင်ယေရှုသည်သူမကိုချစ်ကြောင်းထက်ကျွန်ုပ်ကိုပိုမိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၌လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်အားမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ #wiseWordsTrip #NoWonderYouMyFavRapper
ဖေါ်ပြ: နံနက် Mashup 01/31 | ဓမ္မ Matters
AprilC • မတ်လ 3, 2014 တွင် 8:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့ကိုဤရေးသားဖို့အချိန်ထွက်ယူသောကြောင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်. ဒီ post ကျပန်း၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကိုတကယ်မစဉ်းစားဘူး (heck, ဒီစာမျက်နှာကဒီနေ့ထိတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာငါတောင်မှမသိခဲ့ဘူး). မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ငါသည်သင်တို့ကိုရေးသားခဲ့သည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်…ငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းက ဦး စားပေးကိစ္စပဲ. ငါလူသည်လက်ထပ်ခဲ့သည်5အနှစ် (ငါတို့မှာရှိတယ်3ကလေးများအတူတကွ) သူသည်မိမိစကား၌ရှိသောကြောင့်တော့ဘူးလက်ထပ်ချင်ကြဘူး—ငါသည်သူ၏ preference ကိုမဟုတ်ခဲ့ပေ (သူကမကြာခဏချောကလက်ရေခဲမုန့်ကိုသုံးလိမ့်မယ် / သူ၏အမှတ်ကိုသက်သေပြရန်ကြိုးစားရန် vanilla ရေခဲမုန့်နှိုင်းယှဉ်မယ်–မိမိအ preference ကိုတစ် ဦး အွမ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်….”ကောင်းတယ်” ကိုယ်ခန္ဓာ–ငါမှာထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်). အရူးလုပ်တာကသူဟာခရစ်ယာန်တွေကိုရက်ပ်လုပ်တာပါ—(????). ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါသည်သင်တို့ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကိုအကြောင်းကိုသွားလေ၏သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏—သင်၏ဇာတိအလိုဆန္ဒများထက်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုထည့်သွင်းခြင်း…..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်သကဲ့သို့သင်၏ဇနီးကို ဆက်၍ ချစ်ပါ….ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါ၏ပဌနာ၌စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်…..
သင့်ရဲ့ကောလိပ်အဖော် • ဧပြီလ 17, 2014 တွင် 5:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အများအားဖြင့်ငါဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ဆောင်းပါးကိုမဖတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီရေးသားချက်ကကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်! မင်းရဲ့အရေးအသားပုံစံကကျွန်မကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်.
အခြားသတင်းများ • သြဂုတ်လ 31, 2014 တွင် 1:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့. ငါဖြူမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်တူညီသောအကြောင်းပြချက်. ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. စာကောင်းကောင်းဖတ်ပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဘုရားသခင်နှင့်သင့်မိသားစုအစ်ကိုကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ. ချီးမွမ်းကြလော့, thal.
နေ့ • နိုဝင်ဘာလ 22, 2014 တွင် 9:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းစွာ, ကျွန်ုပ်တို့၌ကောင်းမွန်သောလူမည်းအမျိုးသားများသည်မိန်းမများမဟုတ်ကြသောအဖြူရောင်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီးလူမည်းလူမည်းများဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူအများအံ့အားသင့်ကြသည်။. လူမျိုးရေးမှတ်ချက်တွေတည်ရှိနေတာဝမ်းနည်းစရာပါ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကလူတွေခံစားရသလိုပဲ, အထူးသဖြင့်၌တည်၏, အမျိုးသမီးများ- အနက်ရောင်တွေ. ငါ့ရည်းစား Latino သည်စံသတ်မှတ်ချက်နှစ်ဆရှိသည် & ငါက Black ရယ်အဆင်ပြေပါတယ် (Black ကအမျိုးသမီးများအတွက်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအပြင်ဘက်ချိန်းတွေ့ရန်). အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါလျောက်ပတ်သောမြင်သောအခါ (အရာအလွန်နည်းပါးဖြစ်ကြသည်) အဖြူ / အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူလူမည်း, ကျွန်ုပ်သည်အခြားညီအစ်ကိုများသွားသော DANG ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်…ယခုဖွင့်နှလုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကနေစကားပြောသို့မဟုတ်မပါပဲ. ဒါကဒါပဲလေ.
ဖေါ်ပြ: အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသား | ခေါင်းစဉ်
ဂျက်ဖ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟေ့ခရီးစဉ်, ခက်ခဲသောမေးခွန်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးစဉ်းစားသောတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. မင်းလိုပဲငါ Michelle နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါငါမည်သည့်ဇနီးလိုက်စားဘူး. သူမရရှိနိုင်ခဲ့တယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်စည်းလုံးမှုကိုဖြစ်စေသောအရာဖြစ်သည်. ငါသာချိန်းတွေ့နှင့်ငါတာဝန်အတွက်ပိုပြီးလက်ထပ်သူအနက်ရောင်အမျိုးသမီးတွေလက်ထပ်ခဲ့သည် (ကလေး) နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားထက်ယဉ်ကျေးမှုမျှော်လင့်ချက်. ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရံဖန်ရံခါလည်ပတ်မှု မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဟုယုံကြည်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရောင်သည်တူညီနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများရှိခဲ့ကြပြီး၊ ခွဲခွာ။ ကွာရှင်းပြီးနောက်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုအနာပျောက်စေရန်ကျွန်ုပ်၏ကြေကွဲသောနှလုံးထဲသို့ ၀ င်လာသည်. ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏အသားအရောင်ထက်မကငါ့ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်ကျွန်ုပ်ဇနီး၏ရဲစွမ်းသတ္တိအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဘဝလမ်းစဉ်တိုင်းမှလူများအားဘုရားသခင်အပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်. အဓိကအချက်မှာနိုင်ငံတော်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးညီမျှသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးသခင်ယေရှုသည်အလုံးစုံတို့၏သခင်ဖြစ်သည်.
ဂျက်ဖ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟေ့ခရီးစဉ်, ခက်ခဲသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. မင်းလိုပဲငါ Michelle နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါငါမည်သည့်ဇနီးလိုက်စားဘူး. သူမရရှိနိုင်ခဲ့တယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်စည်းလုံးမှုကိုဖြစ်စေသောအရာဖြစ်သည်. အတိတ်ကာလကငါအနက်ရောင်အမျိုးသမီးများနှင့်တာဝန်ရှိကြောင်းထဲကလက်ထပ်ခဲ့သည် (ကလေး) နှင့်ယဉ်ကျေးမှုမျှော်လင့်ချက် (မိသားစု) နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ခြင်းထက်. ချာ့ချ်တက်သူကလွဲလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ခဲ့ဘူး, ငါနေမကောင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရောင်သည်တူညီနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများရှိခဲ့ကြပြီး၊ ခွဲခွာ။ ကွာရှင်းပြီးနောက်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုအနာပျောက်စေရန်ကျွန်ုပ်၏ကြေကွဲသောနှလုံးထဲသို့ ၀ င်လာသည်.
ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏အတိတ်ကိုမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏အသားအရောင်ထက်မကငါ့ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်ကျွန်ုပ်ဇနီး၏ရဲစွမ်းသတ္တိအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဓမ္မအမှုသည်လမ်းလျှောက်တိုင်းမှလူများအားဘုရားသခင်အပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သူ၏ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်လိုအပ်သည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်. နိုင်ငံတော်သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးညီမျှသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးသခင်ယေရှုကိုလူခပ်သိမ်းတို့၏သခင်အဖြစ်အုပ်ချုပ်သည်. သင့်မိသားစုအတွက်ဆုတောင်းပေးပါ.
ခွေးရူး • ဒီဇင်ဘာလ 18, 2014 တွင် 2:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါအီးမေးလ်ပါသောအချို့သော SMS များကိုလျစ်လျူရှုနေသူများကိုလိမ်ညာခြင်းနှင့်လုယက်ခြင်းများအတွက်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအမြဲတမ်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအဖြစ်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်မှလွတ်မြောက်ရန်ကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တူသည်၊ ဘယ်မှာငါ့ကိုချစ်ပေမယ့်ကိုယ့်လူမျိုးကိုသာမကငါလူမျိုးကိုဂရုမစိုက်တဲ့အမေရိကန်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရခဲ့တယ်,ယဉ်ကျေးမှုသာလူတစ် ဦး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ & သူမကိုဂရုစိုက်ပါ “ငါဘယ်သူလဲ” ဘုရားသခင်နဲ့အတူသူမရွေးချယ်နိုင်တာအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်.
ခွေးရူး • ဒီဇင်ဘာလ 18, 2014 တွင် 2:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါခရီးစဉ်ကိုတက်ခဲ့တယ် ကျနော့်ရဲ့မူဝါဒကငါ့ကိုချစ်တဲ့နေရာ၊ လူမျိုးစုသာမကဘဲလူမျိုးရေးကိုဂရုမစိုက်တဲ့အမေရိကန်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရခဲ့တယ်,ယဉ်ကျေးမှုစသည်တို့… လူတစ် ဦး တည်းပိုင်မှန်ကန်သူ & သူမကိုဂရုစိုက်ပါ “ငါဘယ်သူလဲ” ဘုရားသခင်နဲ့အတူသူမရွေးချယ်နိုင်တာအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်.
ရိုင်ယန် • ဒီဇင်ဘာလ 27, 2014 တွင် 1:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလူမည်းယောက်ျားတွေကြိုက်တတ်တဲ့သူမိန်းကလေးတစ် ဦး ချိန်းတွေ့တယ်… ငါဖြူတယ်. သူမကကျွန်မကိုအရမ်းကြိုက်တယ်လို့သူကကျွန်မကိုအာမခံပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲငါ့ထံသို့ကြီးမားတဲ့မလုံခြုံမှုပါပဲ. တစ်နေ့မှာဒီမိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ဤပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များကိုဖတ်ရန်ကောင်းသောအရာများရှိပါသလား?
Maleshia • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 11:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့ခရီး! ကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အဖြူရောင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အနက်ရောင်ရည်းစားများအကြားဤစကားပြောဆိုမှုသည်အမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်. ငါလူမည်းများအတွက် ဦး စားပေးရှိသည်ပေမယ့် (ငါအနက်ရောင်မတ်ေတာအတှကျအားလုံးပေါ့), သင်၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်ဘုရားသခင်မည်သူအသုံးချနိုင်သည်ကိုသင်ဘယ်တော့မှမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လူမျိုးစုအပြင်ဘက်တွင်အမြဲတမ်းချိန်းတွေ့ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်. လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ကိုအခြေခံတဲ့သူတွေကိုကြည့်တယ်, ဇာတ်ကောင်, သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးများ, ငါသူတို့သိရန်လာပြီသကဲ့သို့ငါနှင့်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်တွေဘာမှထက်ပိုပါတယ်. အသွင်သဏ္matterာန်သည်အရေးပါတယ်၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့လူမျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုမှာသိသာထင်ရှားသောအခြားအရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်လူမှုရေးအခင်းအကျင်းအချို့ကိုနားလည်မှုလွဲမှားနိုင်တယ်, သို့သော်ဤအချက်များ dealbreaker မရှိကြပေ. ဘာမှမ, သူတို့ကဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့လုပ်လိမ့်မယ်. မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကလှပတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တယ်။ ငါလည်းတစ်နေ့နေ့မှာတွေ့ကြုံခံစားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်. အလုံးစုံ, သင်နှင့်အတူချစ်ကြသူမကူညီနိုင်ပါ, မသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့အနက်ရောင်လျှင်၏, အဖြူ, ဝါသော, Barney ခရမ်းရောင်, သို့မဟုတ် Ninja လိပ်အစိမ်းရောင်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တစ်လောကလုံးဖြစ်ပြီးလူမျိုးစုအားလုံးထက်ကျော်လွန်သည်. ခရစ်ယာန်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အတူတူပင်ချစ်ကြရမည်ဖြစ်သည်. တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ဝိညာဉ်ကြင်ဖော်, စစ်မှန်တဲ့ပွဲ, ဘဝပါတနာ, နှင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေမှာသင်နှင့်အတူရှိနေသည်ဟုသင်ထင်မြင်ခဲ့သောသူနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်. နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အတွက်သင်ဂျက်စီကာကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကြားရတာကျွန်မဝမ်းသာမိတယ်, ကရုဏာ, ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောမိန်းမမူကား၊. သင်၏ပေါင်းစည်းမှုသည်ဘုရားသခင်၌သင်၏ယုံကြည်မှုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးထက်ကျော်လွန်ကြောင်းစစ်မှန်သောသက်သေခံချက်ဖြစ်သည်. မင်္ဂလာ Be.
အမှတ် • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2015 တွင် 3:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟေး, ကိုယ်မင်းကိုခံစားရတယ်. ကျွန်ုပ်တွင်သြစတြေးလျအဘော်ရီဂျင်နီအမွေအနှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်အခြားကိုရီနှင့်လက်ထပ်ချင်ခဲ့သည် (ဘော်ရီဂျင်နီ) ဒါပေမယ့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘိုးဘွားဘာသာတရားကြောင့်အလွန်ခက်ခဲစေခဲ့သည်. ငါ Anglo Red ခေါင်းကိုလက်ထပ်ပြီးတက်ခဲ့သည်. သို့သော်သူသည်ယေရှုကို ချစ်၍ ထိုအရာသည်အရေးကြီးသည်.
ဣဇာက်သည် • ဧပြီလ 9, 2015 တွင် 11:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအသက်တာမိတ်ဖက်အပေါ်တစ် ဦး ရွေးချယ်မှုလုပ်လိမ့်မည်အချိန်နီးကပ်အဖြစ်ငါမှားလမ်းပေါ်မှာမဟုတ်ကြောင်းသိရဖို့ဝမ်းသာ!
Jamel • ဇူလိုင်လ 12, 2015 တွင် 9:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီကနေ့ • စက်တင်ဘာလ 24, 2015 တွင် 3:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဧဇရ • နိုဝင်ဘာလ 6, 2015 တွင် 3:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နေဝင်ချိန်ရောက်သောအခါ၊, အာဗြံသည်ကြီးသောအိပ်ခြင်းဖြင့်အိပ်ပျော်လျက်၊; နှင့်, ဘာလဲ, ထူသောမှောင်မိုက်နှင့်တွေ့။ ၊ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏. အာဗြံကိုခေါ်။ ၊, သင်၏အမျိုးအနွယ်သည်သူတပါးပိုင်သောပြည်၌aည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်၊, သူတို့အမှုကိုစောင့်ရကြမည်; အနှစ်လေးရာပတ်လုံးညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်; ထို့အပြင်ထိုလူမြိုး, ဘယ်သူ့ကိုသူတို့အစေခံကြလိမ့်မည်, ငါစစ်ကြောစီရင်မည်: ထိုနောက်မှ၊ သူတို့သည်များစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မည်။
"ကြှနျုပျလူမညျးဖွစျပါတယျ, ဒါပေမယ့်တင့်တယ်, အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့၊, ကေဒါတဲကဲ့သို့၎င်း၊, ရှောလမုန်မင်း၏ကုလားကာကဲ့သို့၎င်း၊. ငါ့ကိုမကြည့်ပါနှင့်, ငါသည်လူမည်းဖြစ်၏, ငါ့ကိုနေရောင်ခြည်ပေးသောကြောင့်၊: ငါ့အမိ၏သားသမီးတို့သည်ငါ့ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏; စပျစ်ဥယျာဉ်တို့ကိုစောင့်စေကြ၏; ကိုယ်ဥယျာဉ်ကိုမစောင့်ရပါ။
အပြန်အလှန်နံပါတ်များ 12:10-15 မာရီယမ်သည်မိမိ၏ပရောဖက်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောအခါဘုရားသခင်ကကျိန်ခြင်းကိုခံရသည်ဟုဖော်ပြထားသည်, ထို့ကြောင့် Mariam သူမ၏အရောင်သို့မဟုတ်အရောင်ချွတ်ဆီးနှင်းကဲ့သို့အဖြူဖြစ်လာခဲ့သည်ခဲ့သည်. ဤအချက်၏အဓိပ္ပာယ်မှာခရစ်ယာန်များသည်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကော့ကေးဆပ်လူမျိုးများသည်၎င်းတို့သည်ရွေးချယ်ထားသောလူများဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်, သမ္မာကျမ်းစာသည်Israelသရေလအမျိုး၊ ယာကုပ်ကိုမွေးဖွားကြောင်းဖော်ပြသောအီဂျစ်ဘုရားသခင်အကြောင်းဟီဘရူးစာအုပ်ဖြစ်သည် 12 andသရေလအမျိုးကိုနက်နဲသောအရာဖြင့်ထုတ်ဘော်တော်မူ၏, သန့်ရှင်းသောနွယ်သားအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များကဲ့သို့.
ငါဘယ်သူလဲငါသိတယ်. ထိုအခါငါအဖြူကလူချိန်းတွေ့ / လက်ထပ်ထိမ်းမြား Nubian ကလူဆန့်ကျင်ဘူး. ငါဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒါကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်စေတယ်, ငြိမ်းချမ်းရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုရင်ဆိုင်နေရသောအရာများအစားကမ္ဘာမြေကိုအမွေဆက်ခံနိုင်သည်.
နာသန် Yonas • နိုဝင်ဘာလ 26, 2015 တွင် 1:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော & အဆက်မပြတ်မိသားစု
PK • ဒီဇင်ဘာလ 24, 2015 တွင် 3:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤ post ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပျော်ရွှင်မိပါတယ်. အခြားလူမျိုးစုများကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်လူမျိုးပေါင်းစုံဆက်ဆံမှုများမှလူများက၎င်းတို့အားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း ၉ ကိုလိုလားသည်. ရိုးသားမှုအားလုံးမှာ, ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်. ငါတစ်ယောက်ယောက်ကလူမျိုးရေးအရစကားပြောနေတာနဲ့လက်ထပ်တာကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး. သို့သော်, လူမျိုးရေးစုံတွဲများနှင့်လက်ရှိဆန့်ကျင်သောလူမည်းဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အချို့သောအပျက်သဘောတွေ့ဆုံမှုများကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေခဲ့သည်. သို့သော်သူ၏ကျေးဇူးတော်အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ, ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကိုပြန်လည်ထူထောင်ပြီးမှန်ကန်သောလမ်းကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့လူတွေကိုမြင်ဖို့ငါ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးလို့ပဲ – ငါပိုင်လူမျိုးစုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားကိုဖော်ပြသောသူများပင်.
jony marvo • ဇန္နဝါရီလ 3, 2016 တွင် 4:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါပေမယ့် • ဇန္နဝါရီလ 25, 2016 တွင် 1:44 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါပြောရလောက်အောင်စိတ်မကောင်းပါဘူး .. ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာ့အရှေ့ဘက်မှအဖြူရောင်မိန်းကလေးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်.
ကျွန်တော့်မိဘတွေကဖျားနာပြီးအမေရိကန်ကိုလာချင်တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့နေလို့မရဘူး. ကျွန်ုပ်သည်အိမ်ထောင် ဦး စီး ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုသည်.
ငါဝမ်းနည်းပက်လက်, ငါတို့ကွာရှင်းခြင်းဖြင့်သွားကြသည်ယခု၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုကြောင့်ယခုစိတ်ပျက် .
လက်ဆောင်ပေးမယ် • မတ်လ 5, 2016 တွင် 1:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ဒါကအင်အားကြီးမားတယ်, ဘုရားသခင်ကလူနှစ် ဦး ကိုမိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံစေရေးအတွက်သူတို့ကိုစည်းလုံးစေတဲ့အတွက်အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်လုံးများကိုကျော်။ မြင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုဖွင့်ပေးသည်.
သစ္စာ • မတ်လ 27, 2016 တွင် 1:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီငါအဖြူလူကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ယနေ့နေဆဲအမျိုးသမီးများအတိတ်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ငါနှင့်အတူအခြေချရန်ကောင်းသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်မနိုင်နေဆဲ.
အဲရစ် • မေ 2, 2016 တွင် 12:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်းဇနီးဘယ်လိုလူမျိုးမျိုးလဲဆိုတာကိုငါသိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ဤဖြေရှင်းရန်ကြားလျှင်မယုံနိုင်စရာပါပဲ (ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု) ထိုကဲ့သို့သောနှိမျ့ခခြွငျးနှင့်အဆိုးမြင်နှင့်အတူပြနာ. ဘုရားသခင်ကိုအရင်ရှာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
နင် • ဇွန်လ 4, 2016 တွင် 5:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အကောင့်အားလုံးအားဖြင့်စကားလုံးများသည်အမှန်တရားမရှိနိုင်ပါ, ယုံကြည်သူအတွက်လား၊. ငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆီသို့အသုံးပြုခြင်းကိုအလေးပေးရပေမည်,” ငါဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး, အမှန်, ကျွန်တော့်ဇနီးဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်လာမလဲ, ငါပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်သူမ၏အနက်ရောင်အဖြစ်မြင်ကြလိမ့်မယ်။” များစွာသောလိုပဲ, ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်း၌ဘုရား၏အလိုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါကသမျှသောအရာနှင့်အတူယုံကြည်ကြဘူး, ငါ့နှလုံးအလိုဆန္ဒများကိုသူပေးလိမ့်မည် ( ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဦး စားပေးမယ့်မဟုတ်ပါဘူး) ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်, ကျွန်ုပ်၏စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည့်နေရာတွင်ထိုနေရာ၌ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်. မင်းရဲ့သက်သေခံချက်ဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုငါသဘောတူတယ်, ငါအလိုအလျှောက် ဦး ဆောင်လမ်းပြသောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းဖို့အကောင့်ကိုင်ထားပါ, လိုအပ်ချက်, မလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး. ပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်စေရန်: ငါဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်, ခရစ် Hemsworth, နှင့် Ben Affleck (တစ်ခုတည်းအခါ), ဒါပေမယ့်ငါကသူတို့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ဆန္ဒရှိသည်; ငါ့နှလုံးအလှတရားကိုလိုလားသောအခါ, ခွန်အား, ဇာတ်ကောင်, နှင့်အံ့ fully ဘွယ်သော - ဖန်တီးလူမည်း၏ခွန်အား! ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်နှင့်ကင်းသောလောကတွင်ကျန်ခဲ့ပါက, ဒီဖြစ်ကောင်းအများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးမှာထိုကဲ့သို့သောလှလှပပလုပ်သောလူသားသည်ယုတ်ညံ့ခဲ့သည်, အရှက်, ။, မင်္ဂလာပါ, စသည်တို့ကို…ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောသူနှင့်အတူကျွန်ုပ်ခရီးစဥ်မပြီးရန်မလိုအပ်ပါ. နောက်ဆုံး, ကျွန်တော့်အတွက်, လူမည်း၏ယနေ့ disconcerning ဥပမာပေးတော်မူ၏, တစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တာကိုငါ့သားသိချင်တယ်, (သူမလွန်ခင်သူ့ဖခင်လိုလူကောင်းတစ်ယောက်) နေဆဲနိုင်ပြီးနောက်တဖန်ဖြစ်လိမ့်မည်…….
မာဝါ • ဇွန်လ 25, 2016 တွင် 2:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာကျွန်တော့်ဘ ၀ အတွက်အလွန် ၀ မ်းသာဖွယ်ကောင်းချီးတစ်ခုပါ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မွေးဖွားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းသည်ယခုနှစ် (၈) နှစ်အရွယ်တွင်ကလေးမရရှိခဲ့ကြပါ။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်၌နေ့စဉ်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။,ဒါကြောင့်ငါဖလော်ရီဒါအတွက်မိန်းကလေးတစ် ဦး သူငယ်ချင်းသွားရောက်ခဲ့သည်,သူမကငါစိတ်ထဲဘယ်တော့မှခဲ့သောကလေးတစ် ဦး မွေးစား၏စိတ်ကူးနှင့်အတူတက်လာ၏,ယခုတွင်ငါသည်ကလေးတစ် ဦး လျှောက်ထားရန်ထက်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အံ့သြစရာများကအရာရာတိုင်းကိုအလွယ်တကူသွားနိုင်သည်။(ဉာဏ်ပညာ)ကိုယ့် Inter နိုင်ငံကလေးမွေးစားရေးစင်တာမှမွေးစားခဲ့သည်.
မာရိ • ဇွန်လ 28, 2016 တွင် 10:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဲဒါကကျွန်မကိုအရမ်းသက်သာစေတယ်။ ဒါကဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုပဲ. မှန်ကန်သောလူတစ်ယောက်လာသောအခါဘယ်တော့မှသင်မည်သည့်အခါမှသိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အာဖရိကန်အမေရိကန်တစ်ခုအနေဖြင့်မည်သည့်ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိသောဇုန်တွင်အမြဲရှိနေစရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သေတ္တာထဲမှထွက်နိုင်သည်. ခင်ဗျားပေးခဲ့တဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . သင်၏ဘ ၀ ၌ဘုရားသခင်နှင့်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုကောင်းချီးများစွာဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
အင်ဒရူး • သြဂုတ်လ 18, 2016 တွင် 1:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Marcus • စက်တင်ဘာလ 13, 2016 တွင် 9:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင်၏သားသမီးများနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ကြသူအားလုံးအတွက်အထူးသင့်တော်သည်. ငါတို့ကိုဘယ်လိုချစ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးငါတို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့လက်ထပ်သင့်တယ်! ဤအချက်အလက်သည်ဒေတာအတွက်သာဖြစ်သည်–အိမ်ထောင်သည်မဟုတ်သောစုံတွဲများ; ဒါကြောင့်, သင်လက်ထပ်လျှင်, အိမ်ထောင်ပြုပါ, ကျေးဇူးပြု! သင်ချိန်းတွေ့လျှင်, ထို့နောက်သင်မည်သူနှင့်လက်ထပ်ရမည်ဟုဘုရားသခင်အားပြပါ–သင်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့မသိရလို့ပဲ! လူတွေဟာမတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ကောင်းတဲ့ / အရေခြုံကစားနည်းကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်၊, လူတွေဟာလူကောင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်(သို့သော်ဘုရားသခင်သင့်အတွက်လမ်းပေးထားသောလမ်းသည်သင့်အတွက်မဟုတ်ပါ–ဝိညာဉ်ရေးရာလိုက်ဖက်ခြင်းမဟုတ်ပါ–ပင်2ဘုရားသခင့်သားသမီးများရှိကောင်းရှိပေမည်2တန်းစီမရသည့်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းများ; တပည့်တော်များသည်ဘုရားသခင့်လူကိုသူနှင့်တိုက်ရိုက်မပတ်သက်သောကြောင့်အပြစ်တင်ဆုံးမခဲ့သည့်ကျမ်းပိုဒ်များကိုသတိရပါ; ယရှေုသညျ’ အဖြေကလူတွေကိုဘုရားသခင်ဆီလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာတာ ၀ န်တွေရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်, ဒါပေမယ့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်; ထို့နောက်တဖန်, ဘုရားသခင်သည်ဟောရှေအားပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး နှင့်ထိမ်းမြားရန်ပြောခဲ့သည်–ငါ့မှတ်ဉာဏ်မှန်ကန်စွာငါ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်လျှင်). ဒါကြောင့်, မှားတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်(တစ်ခါတစ်ရံ, ဘုရားသခင်၏ကလေးတစ် ဦး သည်သင့်အတွက်မှားယွင်းနိုင်သည်), လက်ျာဘက်မှသော့ဖွင့်ရုံသာရမည့်ကောင်းချီးများကိုသင်လက်လွတ်သွားနိုင်သည်. ကျိန်ဆဲခြင်းကိုပင်ခံရမည်; မင်းရဲ့ကလေးတွေဖျားနာနေမယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကမင်းရှေ့မှာသေနိုင်တယ်; မင်းကလေးအတွက်သင့်တော်တဲ့မိဘဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်; သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်; သင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်မြတ်နိုးပြီးတစ်စုံတစ်ခုသည်မမှန်ပါ; မင်းကိုလှည့်စားနေသူတစ်ယောက်ရလိမ့်မယ်(စုန်းရှိပါတယ်, မင်္ဂလာပါ, လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊, အကြမ်းဖက်ချိုးဖောက်သူများ, ဂရုမစိုက် naggers, မင်္ဂလာပါ, လိင်မှုကိစ္စသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူဘဝပုံစံဖွင့်လှစ်ရန်သတ်မှတ်သူ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်မငြိမ်လူ, bestiality မှသတ်မှတ်သူ–အဘယ်သူသည်သာမိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖုံးအဖြစ်သုံးပါ, ဘုရားမဲ့ဝါဒီသို့မဟုတ် Agnostics–မင်းကိုမင်းနိုင်ဖို့ဘာသာရေးကိုဘယ်သူသုံးတာလဲ, လိမ်လည်သူ, အဆိုပါ narcissistic သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်, အရက်သမားနှင့် drugheads, conpeople နှင့်တရားမဝင်ပိုက်ဆံရတဲ့, အယူမှား / စာတန်, ပျင်းရိသောလူ, ကလေးသူငယ်–အပျက်သဘောဆောင်သောစကား, ဒါပေါ့, နှုတ်အလွဲသုံးစားပြုသူများ, cursers, ဘယ်တော့မှနောင်တမရကြလိမ့်မည်သူတွေကို, အမှတ်စဉ်လူသတ်သမား, pedophiles / incestuous ကလူ, စသည်တို့ကို. အပြင်မှာ).
သင်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းတယ်, သူသည်သင်တို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်၊(သငျသညျသမျှအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကွာရှင်းလျှင်) ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်မသေခင်အထိခင်ဗျားကိုနောက်အိမ်ထောင်ပြုခွင့်မရတာကိုငါယုံကြည်တယ်(သို့မဟုတ်လိမ္မာပါးနပ်သူများအတွက်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံပါ). သငျသညျကွာရှင်းကာလရထင်မဟုတ်ပါဘူး(လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသစ္စာမှလွဲ။), သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လက်မထပ်ဘဲနေခြင်း. သင်လျှင်ရိုးသားစွာပြောနိုင်ပါသလား(သင်ကအိမ်ထောင်ဖက်တစ် ဦး ၏ဂုဏ်ကိုရယူလျှင်သင်မယူနိုင်လျှင်–ဒါတောင်မှဖြစ်ပျက်မဖြစ်သင့်, ဒါပေမယ့်အဘယ်အရာကိုအများဆုံးလုပ်ဖို့သွားနေကြသည်) သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကသင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ရန်ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။(ဒီကာလဆယ်စုနှစ်များစွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်)?! သင်လက်ထပ်သင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ထံဘာကြောင့်တောင်းသင့်တာလဲ! နောက်မှအပြစ်တရားကိုရှောင်၏(မင်းကံကောင်းချင်လည်းရချင်မှရမယ်, ဒါပေမယ့်သူကသိတယ်) နှင့်သင်၏ခရစ်ယာန်ခရီးတိုးမြှင့်ထားသည်! သင်၏အိမ်ထောင်ရေးပြGodနာကိုဘုရားသခင်မဖြေခဲ့လျှင်ကော(ကလေးတွေ, လွန်း) ပဌနာ–သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်သင်ကြဲခဲ့သမျှကိုပြန်လည်ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်?!
Marcus • စက်တင်ဘာလ 13, 2016 တွင် 10:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အခြားကိစ္စတစ်ခုတွင်: တချို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားရှိပါတယ်(သငျသညျကိုသိမဟုတ်လျှင်ဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်–သေချာအောင်သူ့ကိုမေးပါ; မခန့်မှန်းပါနဲ့) ဒါကပြtroubleနာကိုမေးနိုင်တယ်: 1. အမေရိကရှိ BMWF လက်ထပ်ထိမ်းမြား: ကျနော်တို့အဖြူတိုးတက်သော၏ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျ, ရည်ရွယ်ချက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု! အဖြူရောင်လူမျိုးရေးခွဲခြားသူများသည်ငါတွေ့ဖူးသမျှအခြားအုပ်စုများထက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုပိုမိုကျူးလွန်သည်! ထိုအခါလူမည်းသည်ရန်သူအရေအတွက်ဖြစ်သည် 1! စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအရာတို့ကိုသင်၏အစာထဲ၌ထည့်ကြပြီ, လူမည်းများနှင့်သူတို့၏ကလေးများသည်ညစ်ညမ်းသော / ပိုးမွှားများပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့်လက်ဆွဲခြင်းများခံရနိုင်သည်, စာလုံးပေါင်း / ကျိန်စာကိုလူသို့မဟုတ်သူ၏ကလေးတွေအပေါ်ထားလိမ့်မည်, BMWF လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုသင်ထင်ထားသည့်အတိုင်းကြေငြာပါကလူမည်းလူမည်းများနှင့်ရဲများအထင်လွဲမှားစွာပြုမူဆက်ဆံသည်, သူတို့သည်မိသားစုကိုငြင်းပယ်ကြသည်, သူတို့ “နီပိုတစ်စန်” စင်ကြယ်သောအဖြူမိသားစုဝင်များ(ကလေးတွေ, လွန်း) ရောနှောအဖွဲ့ဝင်များကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း(ကလေးတွေ) နှင့်လူမည်း, သူတို့ကသူတို့မြည်တမ်း “ရန်သူ”, သူတို့ကလူမည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသတ်ပစ်ကြတယ်, အချို့သောအစ်ကို / အစ်မတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်တင်းမာလာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မလိုမုန်းထားဖြစ်လာပြီးအားလုံးနီးပါးအဖြူအစ်ကို၊, ဆရာများမသိမသာ villify, စသည်တို့ကို. သင်၏ကလေးများသည်သူတို့၏မိခင်မိသားစုနှင့်အဆင်မပြေသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်? ခရစ္စမတ်မှာ: အဖြူကလေးတွေရ $150 ဒီအသင်းမှလက်ဆောင်, ဒါပေမယ့်သင့်ကလေးတွေရ $25 လက်ဆောင်သို့မဟုတ်ဘာမျှမ. သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်သင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ(ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ကလေး) နှင့်သင်၏မိသားစုကအတူကတစ်ခုခုနှင့်အတူသက်သေပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းရှိမရှိအံ့ wond ခြင်း? ဤအရာများစွာကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်; ဒါပေမယ့်လည်း, ဤစုံတွဲများသည်အခြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုများနှင့်ဆက်ဆံရမည့်အရာများကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်, လွန်း! ဥပဒေကြမ်းများ, ပြည်တွင်းအိမ် / ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစောင့်ရှောက်မှု, မိသားစုအသုံးစရိတ်များ(တစ်ခါတစ်ရံမမျှော်လင့်သော), ကလေးများဆွေးနွေးမှု(အထူးနှင့်အခြားသူများထက်ပိုပြီးအချိန်လိုအပ်သည်–လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့လူဖြူတွေကသူတို့ကိုလူမည်းတွေအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးမိဘနဲ့လူအားလုံးကိုနှစ် ဦး စလုံးအတူတူချစ်တဲ့ဟန်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုသင့်ကလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်တောင်အားပေးခြင်း), အလုပ်များ, သင်၏သူငယ်ချင်းများဖြစ်ရန်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်း, စသည်တို့ကို. ဤမျှလောက်သောသွားမင်္ဂလာဆောင်မပျော်စေသည်ရှိပါတယ်, ဘုရားသခငျသညျကစီရင်မပြုခဲ့လျှင်!
2. ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်၌ကြီးမားသောကွာဟမှုရှိရာသို့မဟုတ်ဘာသာရေးသင်ကြားမှု၏အဓိကအချက်များဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်သဟဇာတမဟုတ်ရှိရာလက်ထပ်ထိမ်းမြား. ရှောလမုန်မင်းကြီးကိုမေးမြန်းပါလော့. ခရစ်ယာန်နှင့်မူဆလင်. ခရစ်ယာန်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ. ခရစ်ယာန်နှင့်ဟိန္ဒူဘာသာ. ခရစ်ယာန်နှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒ. ခရစ်ယာန်နှင့်စာတန်(လူမိုက်လူ, ကျောက်တုံး, နှင့်သူတို့၏အခြားဂိုဏ်းနှင့်ဆက်ဆံမှု). ဘုရားသခင်မဝင်ခင်သင့်ကိုအဲဒီမှာထားစေချင်တယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမင်းကိုသုံးပြီးမင်းရဲ့ခရီးစဉ်မှာနားထောင်မဲ့သူဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောင်းပေးလိမ့်မယ်!
Brian • ဒီဇင်ဘာလ 28, 2016 တွင် 6:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယောလ • ဇန္နဝါရီလ 2, 2017 တွင် 4:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါအရမ်းကောင်းတယ်. ကိုယ်ကြိုက်တယ်. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ.
Mbah ယောလ • ဇန္နဝါရီလ 2, 2017 တွင် 4:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါအရမ်းကောင်းတယ်. ကိုယ်ကြိုက်တယ်. ဘုရားသခ
JoshuaKirkland • ဇန္နဝါရီလ 7, 2017 တွင် 2:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်းရဲ့ drive ကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်, ပြဌာန်းခွင့်, စိတ်အားထက်သန်မှု, & ယုံကြည်ခြင်း. ဤရောဂါသည်သင့်ကိုကူးစက်စေသောအချက်ဖြစ်သည် & ခင်ဗျားအတွက်ဘဝကိုတကယ်ခက်ခဲစေတာဟာလုံးဝအရူးပဲ! သို့သော်, မင်းတည်မြဲတယ် & ကြောင်းအားလုံးမှတဆင့်စစ်တိုက် & ဘုရားသခင်တောင်းတော်မူသောအမှုတို့ကိုအလျှင်းမပြုကြနှင့်. ငါ Unashamed ခရီးစဉ်၏ကြားလျှင် 2012 မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်, အဘယ်ကြောင့်သင်ကြိုးဆွဲချနေရသည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲစတင်တွေးတောမိသည်. တစ်ခါကမင်းရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုရောဂါရှိနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ် & သငျသညျကြေးအလုပ်သင်စိုက်ကြည့်ခဲ့ကြသည်, ဘုရားသခင်သင့်အတွက်နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်. ထလွတ်လာသောအခါ, ငါ SOOOO စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်! လူသား, ငါ soooooo ဖောင်းပွခဲ့သည်! အမှန်အတိုင်းပြောရရင်, The Good Life သည်ကျွန်ုပ်နားထောင်ခဲ့သည့်ပထမဆုံးခရစ်ယာန်ဟစ်ဟော့ပ်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည် & ဝယ်ယူ. အဲဒီအချိန်ကစပြီး, ယေရှုကိုချီးမွမ်းသည့်ဟစ်ဟော့ဂီတနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်. မင်းရဲ့ဂီတကငါ့ဘဝမှာသြဇာညောင်းခဲ့တယ်. မင်းရဲ့ရုန်းကန်မှုများကိုတွန်းလှန်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်သက်ရောက်နိုင်အောင်ဆုတောင်းပါ! #116
Blosam • မတ်လ 8, 2017 တွင် 3:10 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်. ငါပျော်တယ်. ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လူမျိုးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေသောစိတ်ဆင်းရဲစရာဘဝမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ. ငါ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုသာငါ့ရဲ့ကလေးတွေအနာဂတ်အတွက်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးကွာရှင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်မုန်းတယ်. ငါခိုလှုံဖို့သွားမျှော်လင့်နေတဲ့ငရဲတွင်နေထိုင်ကြသည်.
Achi • မေ 7, 2017 တွင် 5:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
LaKiKI • မေ 11, 2017 တွင် 9:57 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုလက်ခံရန်သင်မည်သူကြိုးစားနေသနည်း? မင်း, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့? သင်သည်သင်၏ဇနီးအမှန်တကယ်ကောက်ယူပါ, ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်၊. သင်ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ. ဟုတ်ကဲ့, ငါရွေးကောက်သောမိန်းမကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Black Godly အမျိုးသမီးများစွာရှိခဲ့သည်မှာသေချာသည်. သင်တို့မူကားသူတို့ကိုမလိုချင်ကြဘူး, မစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့သည်. မင်းရဲ့ဇနီးကမင်းရဲ့ဆန္ဒပဲ. ဒါကောင်းပါတယ်. ရုံကတရားမျှတဖို့ကြိုးစားနေကိုရပ်တန့်, ဒါကြောင့်ရယ်စရာများနှင့် condescending ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်.
ငါထင်သည်သင်၏ status ကို cosign ကြောင်းမှတ်ချက်များသာ posted ရ, ဒါပေမယ့်ငါထပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်!
ဂျိမ်း • ဇန္နဝါရီလ 23, 2018 တွင် 1:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
WOW တကယ်ပဲ. သင်သည်ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့၎င်း၊. မင်းပြောနေတာကိုမင်းမသိဘူးထင်လို့လား. သူဒီလိုလုပ်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမင်းသဘောမတူဘူးလို့ထင်နေသလိုပဲ. သူထွက်သွားတဲ့လမ်းကသူမအဖြူရောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေတာမို့လူဖြူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူသူမနာကြည်းခြင်း၊. သူမအဖြူရောင်မိန်းကလေးကာလနှင့်အတူသူရူးသွပ်နေသလိုပဲ.
Tiffany • ဇွန်လ 27, 2017 တွင် 5:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကဘာလဲ. ဒီဟာ Tee ပါ. ငါဒီဆောင်းပါးကိုတကယ်ကြိုက်တယ်. ငါနှစ်ပေါင်းနောက်ကွယ်မှပေါ့သော်လည်း. ဟားဟား. ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားငါပဲဒီမြင်နေတာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. ကျွန်မခင်ပွန်းကအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးကျွန်မလည်းလူမည်းတစ်ယောက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုကွဲပြားခြားနားအောင်ဖန်တီးခဲ့တယ်. တောင်မှကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ကအေးမြသောကလေးတစ်ယောက်ပါ, အဆိုပါ fellas တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများ. ထိုအခါငါကောလိပ်ကျောင်းတွင် fellas ခေါင်းစဉ်မှာငါကချစ်စရာကောင်းသည်ဟုထင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်ငါလူမည်းတစ် ဦး အနေဖြင့်ငါ့ကိုထောက်ပံ့ဖို့ခဲယဉ်းသောအရာရှိတစ် ဦး ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့. ဒါကြောင့်ငါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတယ် 30.3လှပသောကလေးမလေးနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာခိုင်မာခဲ့သည်. ငါကမ္ဘာကြီးအတူတကွလာနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရောင်မရှိကြောင်းသိနိုင်အောင်ဆုတောင်းပါတယ်. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
P.S. ကျွန်တော့် Lil အစ်ကိုကအာရှသားပါ, လက်ထပ်ခဲ့သည်9အနှစ်. အမေကသူမကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့အရည်ပျော်နေသောအိုးလို့ခေါ်တယ်.
CAPTJIMJIMANAMBO • ဇူလိုင်လ 16, 2017 တွင် 7:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Millz • သြဂုတ်လ 5, 2017 တွင် 10:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ဇနီးရော၊ “မင်္ဂလာပါ” သူတို့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. ငါကိုယ်တိုင်လူမည်းလူငယ်တစ်ယောက်ပါ, ကျွန်တော့်မိန်းမ, ဘယ်သူဖြူတယ်, ငါထက်ခုနစ်နှစ်ငယ်သည်. ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးခရစ်တော်ကိုနက်ရှိုင်းစွာချစ်ကြသည်. ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုအချင်းချင်းပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်. ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါင်းစပ်ထားသောမိသားစုတွင်လှပသောကလေးလေးယောက်၏မိဘများဖြစ်သည်. ငါတို့အဘို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသောဤပြည်ထောင်စုသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းနေဆဲလမ်းတစ်လျှောက်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအတားအဆီးများနှင့်အတူမလာခဲ့ပါ. သမ္မာတရားကိုငါတို့အဘို့ဘုရားသခငျ၏အစီအစဉ်ကိုကျနော်တို့ရည်ရွယ်သောအရာကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်. ထိုအခါသမ္မာကျမ်းစာ chock- အပြည့်အဝငါတို့ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်နှင့်သူ၏ဘုရားသခငျ့စုံလင်ခြင်းအပေါ်ပြောဆိုသောအခြေအနေတွေ၏ဖြစ်ပါတယ်. (Hosea / Gomer သည်အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်)
ငါလူမျိုးရေးသမဂ္ဂများ၏ကမ္ဘာ့အမြင်စှနျးကှကျ၏မြင်ကွင်းအားဖြင့်ပျက်စီးခဲ့သည်ထင်ပါတယ်, အမုန်း, အခြားသောဆိုးသွမ်းမှုများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ လူသားတို့၏အတွေးများကိုဒုက္ခပေးသောအရာများ. ဤသူအပေါင်းတို့သည်အကြီးမြတ်ဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည့်သမ္မာကျမ်းစာသည်ဤထောင်စုနှစ်များပြီးနောက်တွင်ပင်ပဲ့တင်ထပ်နေသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်.
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီမုန်းတီးမှုကိုယဉ်ကျေးမှုသာမကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့သူတွေဆီကနေတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်. ၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသူသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အဝိဇ္ဇာကိုမပြုပြင်သူများထံမှဖြစ်လျှင် ပို၍ ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်. ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်ပေါ်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသံမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင့်အသံကိုကြားရန်မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုနားလည်သောကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းချီးတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။. သူ (ခရစ်တော်) အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငါတို့ကိုဂလာတိအသင်းသားတွေနဲ့တွေ့တယ် 2:20, ဒါဆိုငါတို့လိုချင်တဲ့ရန်ပွဲကငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်. အဲဒါကိုကြားဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေပါသလား? အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး, သူတို့သာတူသောပိုပြီးမေးခွန်းများကိုထုတ်ဖေါ်: “အိုကေ, ငါပြန်မတိုက်နိုင်ပေမယ့်ငါ့သားသမီးတို့ကော? သူတို့ကိုငါမြင်သောမုန်းတီးမှုမှကျွန်ုပ်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်?
သင်သည်သင်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးမသာခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါပါပဲ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခရီးပေမယ့်ဝိညာဉ်ရေးရာတ ဦး တည်း.
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့နဝမနှစ်မှာရှိနေတယ် (လက်ခုပ်သံများထည့်သွင်းပါ) ငါတို့သည်ငါတို့၏မစ်ရှင်မြင်သောကြောင့်, ငါတို့ပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးစည်းလုံးညီညွတ်သောကြပြီမဟုတ်, ဒါအများကြီးပိုပြီးရှင်းလင်းမဖြစ်နိုင်ပါ. သမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့သည်လောက၏အလင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသောအခါ၊, ငါတို့အမှန်တကယ်ပါပဲ! အချို့ကထိုအရာကိုနားမလည်နိုင်ပါ, ထိုအခါမူကား၊ သင်သည်ကိုယ်အဘို့ပြောသောသူအချို့တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်: “yeah! မင်းမှာနှစ်ခုရှိတယ်!”
ကျွန်တော့်အစ်ကို Trip နှင့်သူ၏အံ့သြဖွယ်မိသားစု၊,
မင်းခရီးကငါ့ညီ၊ . သခင်ဘုရားအားဖြင့်၎င်း၊ တန်ခိုးတော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်း၊. သငျသညျအထံတော်သို့အပြေးဘယ်တော့မှမကြာမှီတိုင်အောင်သူသည်သင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်.
တောင်ပိုင်းမှာနေတဲ့သူတွေကိုသင်တွေ့ခဲ့ဖူးတာသေချာပါတယ်. ငါတို့မူကား၊, သခင်ယေရှုခရစ်ကို၎င်း၊. ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အိမ်ထောင်တွင်ဤသည်ကိုအကောင်းဆုံးပြသသည်, သမ္မာကျမ်းစာအဘို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကပြောပါတယ် “ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သူ၏မျက်နှာကိုမျှမှတ်တော်မမူ” – ရောမ 2:11
Achi • စက်တင်ဘာလ 22, 2017 တွင် 11:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါအတူတူ Godwilling လုပ်လိမ့်မည်
အရူး • စက်တင်ဘာလ 22, 2017 တွင် 3:16 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
bro, ငါသည်ဤ post ကိုအပေါ်သင်အရမ်းတန်ဖိုးထားလေးစားပါတယ်. အမည်းရောင်အမျိုးသားတွေကမတူညီတဲ့လူမျိုးစု / လူမျိုးစုတွေကိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့လက်ထပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်မျှမျှတတဝေမျှနိုင်ခဲ့တယ်. ဤသည်မှာငါ brotha ကြားဖူးတယ်အကြိမ်အနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်’ လူမျိုးစုတစ်စု၏အမျိုးသမီးများသည်အခြားလူမျိုးစုမှအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းရင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘုရားသခင့်ဂုဏ်ရည်တော်၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြပါ. ထို့ပြင်၎င်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်ပတ်သက်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်. ငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်အတိုင်း၊, သင့်ဇနီးနှင့်မိသားစု!
Trinitee Hudson • အောက်တိုဘာလ 20, 2017 တွင် 12:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရစ်တော်၌ငါ့ညီ. ငါသည်ဤဆောင်းပါးအားဖြင့်ဤမျှလောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ်. လူတို့အားနားမလည်သောပြissuesနာများကိုစကားလုံးအားသင်ကြား။ ခွင့်ပြုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Joshua Fordham • ဇန္နဝါရီလ 6, 2018 တွင် 3:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤဆောင်းပါးသည်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မခံစားရပါ. လူမည်းအုပ်စုမှာအနက်ရောင်ယောက်ျားတွေကိုငါတွေ့ခဲ့သလိုအဖြူနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုတဲ့ဆန္ဒကိုတရားမျှတဖို့လိုတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့လူအုပ်စုကိုငါတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။. အဖြူရောင်မဟုတ်သောအုပ်စုများကိုချိန်းတွေ့။ လက်ထပ်သောလူမည်းများသည်အဖြူမဟုတ်သောလူနှင့်သူတို့အဘယ်ကြောင့်လက်ထပ်ရကြောင်းကိုမျှတမှုမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်. သူတို့ပြုလျှင်, အဖြူလက်ထပ်တဲ့လူမည်းတွေကဒီလောက်များများစားစားမရှိဘူး.
ဘုရားသခင်အားအစေခံ။ အပြည့်အဝချစ်မြတ်နိုးသောကျောင်းရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးသည်သင်၏မျက်လုံးကိုမကြည့်မိသော်လည်းဖြူသောမိန်းကလေးသည်ယုံရခက်သောအချိန်ဖြစ်သည်။, လူမည်းရဲ့ kryptonite ဖြစ်ဟုဆိုသည်ခဲ့သူအမျိုးသမီး, လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက်သင်၏မျက်စိဖမ်းမိ. သငျသညျအဖြူရောင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ဤအမှုအရာကျွန်စနစ်မတိုင်မီဘုရားသခငျသညျဒါခဲ့သကဲ့သို့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကဲ့သို့မထင်ရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ဘုရားသခင်သို့ဆောင်ခဲ့ရန်ကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်.
အာမင် • ဇန္နဝါရီလ 10, 2018 တွင် 1:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤမျှလောက်များစွာသောအနက်ရောင်အမြိုးသမီးမြားဒီနေ့ pissed နေကြသည်အဘယ်ကြောင့်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ.
Joshua Storm • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2018 တွင် 1:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော်သင်နှင့်သဘောတူသည်, ခရီးစဉ် Lee က. လူတစ်ယောက်လုံးကို ၀ ိညာဉ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာငါသိလာရပြီ, စိတ်ဝိညာဉ်, နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ. ဒါကြောင့်ငါတို့ဝိညာဉ်သတ္တဝါများဖြစ်ကြသည်, စိတ်ရောဂါ, အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ကျင်လည်ပါ၏. လူအများစုကြည့်ကြတာကံဆိုးတာပဲ “အိမ်” လူတစ် ဦး ၏ ၀ ိညာဉ်သည်အဓိကဖြစ်သည်. ဒီနေရာမှာတစ်စုံတစ် ဦး ကဒီမှာငါ့အမှတ်ချက်ဖတ်နေဘို့ဤ re- အလေးပေးဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်. လူသည်ဝိညာဉ်သတ္တဝါဖြစ်၏. သူ၌ဝိညာဉ်ရှိ၏ (စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အတွေးများ) သူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ခန္ဓာ၌နေထိုင်သည်.
လူအများစုအမြဲတမ်းအလွယ်တကူခွဲခြားသိနိုင်သောအဖြူသို့မဟုတ်အနက်ရောင်အသားအရေသည်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောအိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်. မိုင်းကအနက်ရောင်, သင်၏အမဲရောင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်. လူတွေကိုသူတို့ရဲ့အရောင်နဲ့သတ်မှတ်ဖို့ “အိမ်” စာအိတ်၏အသွင်အပြင်မှစာတစ်စောင်၏ contents ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းနှင့်တူ၏. သူတို့ပြောရသည့်အကြောင်းရင်း “သူ့အလောင်းကိုအနားယူခဲ့သည်” ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်လို့ပဲ, သင်တို့မူကားအသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤအမှန်တရားများကိုတန်ဖိုးထားလျှင်, မည်သည့်ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်အရောင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. ဘုရားသခင်သည်ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်, သူသည်ဤကမ္ဘာမြေသည်သူ့ပန်းချီကားဖြစ်သည်ကိုသူသိသည်, သူကအားလုံးအဖြူဆေးထိုးခြင်းဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး, သို့မဟုတ်အားလုံးအနက်ရောင်. အနုပညာ၏လှပမှုသည်အရောင်များနှင့်ရောနှောနေသည်, တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး. ဒါကြောင့်ငါတို့ကွဲပြားမှုတွေအကြောင်းပြောမယ့်အစားအချင်းချင်းပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပသင့်တယ်. ကိတ်မုန့်၌ကြက်ဥအပါအ ၀ င်ပါဝင်မှုများစွာပါ ၀ င်သည်, ဆားငန်, သကြား, စသည်တို့ကို. သူတို့အတူတူရောနှောနေပြီးမုန့်ဖုတ်သောအခါ, ငါတို့ကကောင်းကောင်းကိတ်မုန့်ရ. ဆားထည့်ဖို့ကြိုးစားပါ, သကြား, ဆီ, မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီသင်၏ပါးစပ်၌ဥများနှင့်သင်ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့ GUTS ထွက် puke လိမ့်မယ်!
သင့်ရဲ့ဇနီး / ခင်ပွန်းအဝါရောင်ရှိမရှိ, အဖြူ, အစိမ်းရောင် (သို့) ဘာမှမဆွေးနွေးရကျိုးနပ်ပါသည်. အဓိကအချက်မှာသင်၏အသက်တာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ထိုက်တန်သည်ဟုသင်ထင်သောဆက်သွယ်မှုကိုသင်ရှာမနိုင်ဆိုသည်မှာဖြစ်သည်. ကာလ. ငါရိုးသားစွာထင်ပါတယ်လူမျိုးရေးအရအပေါ်ခွဲခြားသူတွေကိုသေးငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကြ၏, သူတို့တပြင်လုံးကိုလူတစ် ဦး မမြင်နိုင်ပါ (စိတျဓာတျ, စိုးလ်).
Biota Macdonald • မေ 14, 2018 တွင် 10:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်းဒီအကြောင်းရေးခဲ့တာကိုနှစ်သက်တယ်! ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ် ဦး မျိုးကွဲလက်ထပ်ထိမ်းမြား၌မိပါတယ်, နင့်အကြောင်းတွေအများကြီးနဲ့ငါပြောပြနိုင်ခဲ့တယ်.
Triola Dulaney-Ndiaye • သြဂုတ်လ 20, 2018 တွင် 12:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လူများနှင့်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များ! သငျသညျယောက်ျားတွေဘုရားသခင်အဘို့အသကျရှငျစောင့်ရှောက်! မင်းမှာလှပတဲ့မိသားစုရှိတယ်!
RealityCheck • စက်တင်ဘာလ 8, 2018 တွင် 7:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး, ကျွန်ုပ်အဖြူရောင်ဖြစ်နေပြီးသာမာန်လူဖြူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတောင်ယနေ့မတွေ့နိုင်ပါ.
Verena • စက်တင်ဘာလ 9, 2018 တွင် 7:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အားလုံး၏ပထမ ဦး ဆုံး great ကြီးသောဘလော့ဂ်ကိုပြောချင်သည်! ပြီးတော့
စိတ်ထဲမထားပါနဲ့. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိကထားပြီးစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်.
ငါရေးတဲ့စာကိုဖတ်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ် 10 လွန်း 15 မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲငါတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဂျူးစွပ်စွဲချက်ပျောက်ဆုံးသွားပြီ. မဆိုစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်အရိပ်အမြွက်?
ဖေါ်ပြ: Trump နှင့်သူတို့ကိုချစ်သောသူလူမည်းအမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးများ – မျိုးကွဲလက်ထပ်ထိမ်းမြား
Jill • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2019 တွင် 7:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဲမာ • မေ 2, 2019 တွင် 12:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကွာရှင်းရှေ့နေ • ဇွန်လ 19, 2019 တွင် 1:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့၏ site ကိုပြန်အကြွေးနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပေး?
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့သည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ visitors ည့်သည်များကဲ့သို့တူညီသောareaရိယာတွင်ရှိနေသည်
.တ္ • သြဂုတ်လ 2, 2019 တွင် 3:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Ꮃ ow, ဒီအပိုဆောင်းကောင်းပါတယ်, ငါ့နှမထိုကဲ့သို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေသည်
အမှုအရာ, ထို့ကြောင့်ငါ informer အကြောင်းကြားရန်သွားနေပါတယ်.